"New World Order Bible Versions" full movie with Oromo subtitles
Seexanni mana amantaa kana dhaaluu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana.
Seexanni mana amantaa kana dhaauu ykn fudhachuu kan barbaadu ta’uu nan amana....
...yeroo tokkotti nama tokko.
-Nuti ofi keenyaafi dhaloota dhufuuf sirna siiyaasaa addunyaan
ittiin bultu haaraa baasuuf carraa of fuulduraa qabna.
-Foddaa keessan cufaa.
Mana keessan keessatti deebi’aa.
-Amma deebi’aa gala! -Ani keessa jira.
-Nuti siyaasa addunyaa haaraa kana keessatti carraa dhugaa ta’e ni qabna, ...
...siyaasa ykn hoggansa kan Mootummootni gamtooman kan amanamummaa qabu...
-...rasaasawwan gommaa irraa hojjetaman, meeshaa waraanaa Taaseersii...
-...waadaa galeefi Mul’ata qabu fiixaan baasuuf gahee nageenya eegsiisuuf qabu itti fayyadamuu ni danda’a...
...Kan Miseensootoota Mootummoota Gamtoomanii Hundeessan.
-Bara booda Pireezidaanti Buush akka jedhanitti fi annis jecha kana akkuma irra deddebi’ee fayyadamutti
Ana dabalatee nuti siyyaasa addunyaa kana tasgabeessu haaraa barbaadna.
Fallaa kanaatiin rakkoowwan hedduun kan nu mudatan fakkaata.
-Erga nutti dhufee yeroo dheeraa tureera.
Sababni isaas waanta nuti guyaa har’aa yeroo ammaa kanatti hojjenne irraa kan madde dha.
Jijjiiramni Ameerikaatti dhufeera.
-Pireezideent Obaamaa fi Ministeerri Muummee Ingiliiz Goordeen guyyaa haraa’aa
Kisaaraa dinagdee addunyaa keenya mudachaa jiru maqsuuf haalli ajaja addunyaa haaraan akka uumamu waamicha dabarsaa jiru.
-Hojii gaarii nuti amma qabnu
Qabatamaan siyaasa ykn seera addunyaa bulchu haaraa uumuu dha.
-Hojiin kun tarsiimoo waliigalaa Ameerikaatiif yeroo amma siyaasni addunyaa haaraan uumamuu danda’utti baasuu dha.
yeroo amma siyaasni addunyaa haaraan uumamuu danda’utti baasuu dha.
Kun carraa guddaa dha.
-Isin waa’ee siyaasa addunyaa isa haaraa akkuma beektanitti ibsitaniittu
Akka luusiifeeriyaanitti -Eeyyee.
-Akkamitti sana beektan?
-Qoraannoowwan koo akka ani dugda duuba Doolaara Ameerikaa akka ani ilaalu na godhaniiru.
Anis chaappaawwan ykn mallattoowwan keessummaa ta’an kana Doolaara irratti argeera. Mallattoowwan kunneen malllattoowwan ifa
Icciitii hawaasaa mul’isan kan bara bahan dha.
Kan bahanis nama Adaam Weyishuptiin dha.
Akkasumas dugda duuba Doolaaraa irratti mallattoo ykn chaappaa
Karaa harka bitaa jiru kan argitan yoo ta’u rog-sadee keessa ijji ni jira. Ijichi ija Horus dha.
In oduu durii uummata Misiraa keessatti beekamu, kan yeroo ammaa ija Lusiifear ykn Seexana jedhame waamamu dha.
Jechootni lama irra keessa jiran, "ANNUIT COEPTIS", kan bakka bu’u
"Dhaloota labsuu ykn beeksiisuu",
fi kan gadii gara jalaa, "NOVUS ORDO SECLORUM".
-fi Chaappaan Ol’aanaa Yuunaayitid Isteetis isa of irraa qaba.
"NOVUS ORDO SECLORUM": Ajaja haaraaa ykn sirna ajaja haaraa.
-Uummatni gaaffii akkas jedhu gaafachuu malu, “Piraayimiidiin biyya Misiraa
Dugda duuba Doolaara Ameerikaa irraa maal eega ykn hojjeta?
Hariiroo akkamitu Ameerikaa fi Misira gidduu jira?"
Deebiin isaa: Damee Okiluutii irraa kan hafe homtuu
Kanaafuu nuti yeroo kaayyoo luucifeeriyaanii ykn seexanaa gaggeessinu Mul’atana.
Waaqxi firiimaasnary addunyaa kana kaayyoo
baadii fi addaa kana kan Ameerikaan itti qophoofte
Kan addunyaa guutuu sirna
Mootummaa addunyaa tokkotti ,amantaa addunyaa tokkootti
Sirna seeraa addunyaa tokkootti fi sirna maallaqaa addunyaa tokkootti kan geessu ta’uu namootni hubachuu qabu.
Macaafa qulqulluun sirna kana “Mark of the beast” jedhe waama.
-...fi waanti nuti bu’uuruma irraa akka dhugaatti beeknu,
Sirni ajaja moofaa irraa gara
Sirna ajaja haaraa ykn sirna Seexana mataa isaatiin baatti kan jijjiramuu irratti argamu ta’uu dha.
Mallattoon sun kana agarsiisa
Ajajni Addunyaa Haaraa kan mul’isu kanuma dha.
Mootii Yaa’iqoob keessatti, Qoronxoos ffaa : irratti akkas jedha “Kanaafis, namni kan Kiristoos yoo ta’e,
uumama haaraa dha. Inni mofaan darbe,
kunoo, inni haaraan dhufeera.” Akkaataatti Maacaafni Qulqulluu Afaan Ingiliziitiin barreefame inni haaraan
Jecha kana akkanatti kaaha. “Ajajni moofaan deemeera ykn darbeera;
ajajni haaraan eegaleera ," jedha. Lamaanuu afaan walfakkaatu fayyadamu.
Mootich Ermiyaas akkas jedha, “Kanneen nyaataa fi dhugaatiitiin jirataniif,
Hanga guyyaa jijjiramaatti qulqullahuu adda addaa fi ajajawwan foonii isaan irra kaahameera.
Jechuun waa’ee dhufaatii Kiristoos odeessa. Garuu hubadhu
NIV’n wanna kana akkaas jedha “hanga yeroo ajaja haaraatti.” Jedha. Isaan uummata qopheessaa jiru.
Amma ani ati akka kana hubattun barbaada. Macaafni qulqulluu Mootii Yaa’iqoob keessatti Isaayaas : akkas jedha,
“Kanaaafuu, Waaqayyo akkas jedha, Kunoo,
Tsiyoon keessa dhagaa bu’uuraaf nan kaaha, namni dhagaa bu’uuraa qorameefi kabajamaatti amane
Hin qanahu ". Kun Yesuusiin jechaa jira, miti? As irratti ani akka ati hubatu kanan barbaadu
Kitaaba Qulqulluu King James keessatti
Iyasuus dhaga bu’uuraa hundichaa ta’uudha. Amma hoo, buurri gamoo tokkoo eessa,
Irra keessa moo jala?
Bu’uurri jala dham miti moo? Tole?
Kanaafuu yeroo isaan Iyasuus dhagaa bu’uuraa hundichaa dha yeroo jedhan,
Jala as jechuu dha, sirrii dha?
"Kanaafuu namni amane hin qaanahu. :" – Kun Kittaaba Qulqulluu King James dha
"Garuu kan ajaja fudhadhuu dide, dhagaa ijaartootni dagatan,
Inni ammas ijaarsa bu’uuraa keessatti mataa bu’uuraa dha.
Maxxansi Kitaaba Qulqulluu kan Addunyaaa Inni Haaraan isaatiin “Capstone” jedhee waama.
Mallattoon ati argitu Kiristoos bakka bu’a jedhu.
Inni miti; Inni eenyuun bakka bu’a? Mormaa Kiristoos.
-Isin hiriyyoota koo taatanii macaafa o’laanaa kan Jecha Waaqayyoo ta’e wajjin akka turtan kadhadha.
Dhugumatti, kun kan itti goruu qabnu dha.
Yeron gabaabaadha. Dhugaa irraa haalaan fagaachaa jirra:
Kun ta’aa jira. Kun amma dhiyaateera..
Maqaan koo Siteeveen Andarsan jedhama, Paasteera Mana amantaa “Faithful Word Baptist Church” kan Teempee Ariizoonaatti argamuudha.
Waldaan ykn manni amantaa keenyaa Macaafa Qulqulluu King James qofaatiin lallabdi; namootni hedduun
Maaliif akka kana goonu hin beekan. Kaayyoon fiilmii kanaa
Adda addummaa guddaa Kitaaba Qulqulluu King Jamesiifi
Maxxansaawwan kanneen biraa hunda gidduu jiru agarsiisuuf dha.
-Maqaan koo Roojeer Jimeeneez dha. Ani Paasteerii Bataskaana “Verity Baptist Church” kan Sakiraameentoo, Kaalifoorniyaa dha.
Sababa ani Fiilmii kana irratti hirmaachuuf kakka’eef
Yeroo ammaa Jechi Waaqayyoo irratti haleellaan banameera.
Kitaaba Qulqulluu ilaalchisnee ejjennoo qabaachuu qabna. Kunis akka nuti
Isa waraana hafuuraaa keessatti akka taasiisnu nu godha.
-Maqaan koo Deeniis Maakeeyiin jedhama. Ani Bataskaana Baappitisti Noorzsaayidi kan Modeestoo, Kaalifoorniyaatti argamutti Paasteera ykn luba dha.
Ani waggoota kudha jaatiif Paasteer ta’een tajaajilaa jira.
Ani gara waggaa afurtamaatiif akka misiyooniitti bataskaana miisiyoonaa keessatti tajaajila
macaafa qulqulluu barsiisuu hojjechaan ture.
-Amma, har’a ajandaan jira. Ajandaan kun Ajandaa Seexanni Macaafa Qulqulluu jijjiiruuf baafate dha.
Namootni hedduun akkanatti yaadu, "Gaarii dha, Kitaabni Qulqulluu King James hiikaa gaarii dha; Inni yaada haala gaariitiin kan ibse yoo ta’u
maxxansaawwan kan biraa hedduun
gadi aanaa dha. Kitaabootni kunneen akka gaariitti hin hiikamne ta’uu ni danda’u.” Garuu, dhimmichi kana caalaa kan gadi fageenya qabu ta’uu isinitti himuu barbaada.
dhimmichi kana caalaa kan gadi fageenya qabu ta’uu isinitti himuu barbaada. Maxxansaawwan haaraawwan kunneen These new versions are actually
Seexanni Jecha Waaqayyoo waliin dhahuuf kan itti yaalii godhe dha.
Jijjiiramootni kunneen akka tasaa kan taasiifaman akka hin taane isinitti agaarsiisa. Jijjiiramootni kunneen salphaa fi sababa malee kan taasifaman miti.
Jijjiramootni kunneen jijjiramoota tarsimawaa ykn itti yaadaman dha jechaan jira.
Isaanis barnoota Macaafni qulqulluu barsiisuu haleeluuf kan itti yaadamanii taasiifaman dha.
Kitaabni Qulqulluu Efesoon : irratti akkas nuun jedha, "Nuti kan walfalminu fooniifi dhiiga wajjin miti,
Garuu mootiiwwaniifi abbootii aangoo wajjin
, bittootaa addunyaa dukkana keessa jiranii akkasumas
iddoo samii irrattis looltuuwwan afuura badaa wajjin dha male." Namoonni Doolaara Miliyoonaa fi Biliyoonaan lakkahaman qaban kan
Kitaabni Qulqulluun akka dabu gochuu barbaadan fi
kitaaba dabe kana karaa beeksiisaatiin tattamsaasan hedduun ni jiruu ,
Kitaaboota daban kana Bakka Gurgurtaa Qixaaboo kanneen fuulduraa fi qixxalamaann kahanii gurguran uumuun babbal’isu.
Uummata akkas jedhanii itti himu itti agaarsiisu “Kitaaba Qulqulluu isin dubbisuu qabdan kana. Kitaaba Qulqulluu King James dhiisa. Maxxansa haaraa, caalaa baheessaa fi foyyadha argadha.
Maxxansa haaraa, caalaa baheessaa fi foyyadha argadha."
Amma, ani maxxansawwan yeroo ammaa baayyee beekamoo ta’an irratti qorannoo muraasa gaaggeesseen jira.
Kunneen tarreefama amma jiran dha. Ani maddawwan adda adda irraa kan ilaale yoo ta’u
hundumtuu Kitaaboota Qulqulluu shan irratti walitti dhufu.
Yeroo ammaa Kitaabni Qulqulluun tokkoffaan Kitaaba Qulqulluu King James miti. Maxxansaa Idil Addunyaa Haaraa (NIV) dha.
Lakkoofsi lamaffaan Kitaaba Qulqulluu King James dha. Inni sadaffaan,
Kitaaba Qulqulluu “New Living Translation” jedhamu dha. Lakkoofsi afuraffaan Kitaaba Qulqulluu King James isa haaraa dha. Inni shanaffaan,
Maxxansaa Idilee Ingiliffaa ykn ESV dha. Tarreefamoota adda addaa ani ilaale
Duraa duuba xiqqoo adda ta’e qabu. Garuu hundi isaanii shanan kana hunda ni qabu.
-Namootni hedduun hiikaawwan dhibbaatamatti lakkaman akka jiran hin hubatan
Akkuma ifatti beekamutti tokko tokkoo isaanii ilaaluuf yeroo hin qabnu
-Dabiinsawan afur baayyee beekaman irratti xiyeefachuun baayeessa ta’a
Maxxansi Iddil Addunyaa Haaraa (NIV) Kitaaba kakuu haaraa keessaa dubbiiwwan lakkoofsoota kudha jahaa guutummaa guutuutti hin qabu.
Waa’ee jijjiiramoota kumaatamaan jijjiiramanii dubbachuun dura.
asuma seensa irraa dubbiiwwan lakkoofsoota kudha jahaa guutummaa guutuutti hin jiran jechuu koo dha
Maatiwoos : – hin jiru. Maatiwoos : – hin jiru. Hojiiwwan ergamootaa : – lakkoo fsikun
Maxxansa Idil Addunyaa (NIV), ESV fi Hiikaa “New Living Translation” keessaa baafameera....
-Guutummaa guutuutti baheera!
Hojiiwwan ergamtootaa :, Kitaaba Qulqulluu King James: "Otuu daandii isaanii irra deemanii,
Bishaan bira gahan, ilaala kun bishaan jedhan;
Jandarabichii akkas jedhe Cuubamuu maaltu na dhorkaree? Filiphoosiis akkas jedhe
“Onnee kee guutuutiin yoo amante siif heeyyamameera jedhe.
Kanaafuu jandarabichi Amantaa kan hin qabne sun, “Cuubamuu maaltu na dhorkaree?” jedhe
Filiphoosiis, kan lubbuu isaa mo’ate akkas jedhe
Deebisees “Ani Iyesuus Kirisitoos mucaa Waaqayyoo ta’uu nan amana.” Jedhe
Jaandarabichi maal ta’e? Inni ni fayye.
Maaliif? Afaan keenyaan yoo balleessaa keenya amannee dhiifatama gaafanne Waaqayyo Iyasuus kiristoosiin kan du’aa kaase ta’uu
laphee guutuutiin kan amannu yoo ta’e ni fayyina.
Inni Onnee isaa irraa amaneera. Afaansaatiin balleessaa isaa dubbateera. Inni Fayyina argateera.
Kanaafuu isaan maal godhan? Lakkoofsa :
"Sereegelichi akka dhaabbatu ajaje.
Jarri lamaanuu Filiphoosiifi Jaandarabichi gara bishaanichaatti bu’anini isa cuubees.
Kanaafuu Lakkoofsa : Cuuphamuu irraa maaltu na dhorka?
Lakkoofsa : Hanga ati itti amanteetti cuuphamuu dandeessa.
Afaansaatiin balleessaa isaa himate, onnee isaatiin amane;
Lakkoofsa : Isaan isa cuuphan. Ameen.
Maxxansaan Idil Addunyaa Haaraan maal jedha?
"Otuu daandii isaanii irra deemanii, bishaan bira gahan, Jandarabichi akkas jedhe
'Ilaali bishaan akka ani cuupamne kan na mormu eenyu jedhe?’
Seregellaan akka dhaabbatu ajaje. Achii booda jarreen lamaanuu gara bishaanitti bu’anii
Filiphoos isa cuuphe.” d Philip baptized him." Amma isin waanta ta’e qabatanii
Maaltu keessa hafe?
Isin yoo hubataniittu ta’e hin beeku. Lakkoofsi guutummaa guutuutti hin jiru.
Kanaafuu, akkaataa Maxxansa Idil Addunyaa Haaraatiin, isaan daandii irra gadi deema jiru.
Inni akka jedhe, “Cuuphamuu irraa eenyuttu na dhaaba?"
akkaataa Maxxansa Idil Addunyaa Haaraatiin, homtuu! Kaanee si cuuphina.
Maaltu keessaa hafe? Iyesuus Kiristoositti amanuu!
Maaltu keessaa hafe? Wangeela.
Maaltu keessaa hafe? Kitaabootni Qulqullootni kunneen maaliif Iyesuus Kiristoos irratti maaliif haleellaa banan?
Kun anaaf hiika hin qabu.
Garuu dhimmicha duuba gochi Seexanaa jiraachuu otuu beektanii hiika ni qabaata.
-Garuu Maxxansa Idil Addunyaa haaraa keessaa dubbiiwwan lakkoofsoota kudha jahaa keessaa hambisamuu qofaa otuu hin taane,
Isin dubbiiwwan lakkoosota biraa irratti dubbiin lakkoosota kunneen isa muummee keessa jiraachuu dhiisuu danda’u jechuun ammas akka isin Jecha Waaqayyoo irratti shakkii horattan gochuu yaadannoo kennaniiru.
ammas akka isin Jecha Waaqayyoo irratti shakkii horattan gochuu yaadannoo kennaniiru.
Dubbiiwwan lakkoofsotaa akka Maarqoos :. "Gara Biyya lafaa hundumaa deemaa, uummama hundumaatis wangeela lallabaa”
Jechootni waaqayyoo kan akka “Waan goodhani hin beekani waan ta’eef abbaa koo dhiifatama isaaniif godhi.”
Isaan lakkoofsa kana keessaa hin baasne garuu cinaa isaa yaadannoo kaahaniiru.
Yaadannoon kunis namni dubbisu akka dhabamsiisu ni taasiisa.
Kun karaa kamiinuu aangoo kamiyyuu hin qabu.
Nuti Yesuus Kiristoos Waaqa Foon dhufate dha jennee amanna.
Dhimma kana dha egaa maxxansaawwan hammayyaa yeroo hundumaa kan jijjiiraniifi haleellaa irratti banan.
Mee fakkeenyoota muraasa isiniif kenna. Ergaa Yohaannis ffaa :; "Jannata keessa dhugaa baatuu sadiitu jira;
isaanis, abbaa, jechaa fi Afuura qulqulluu:
Sadanuu tokko dha. " Innis bakkatti jecha “Silaasee” jedhu bakka itti argannu dha.
Sadan waaqa tokkichaa
"Sadan kun tokkodha"
The NIV, on the other hand, just says, "Sadanuu dhugaa bahu ".
Abbaa hin caqasu, Jecha hinn caqasu; hafuura qulqulluu hin caqasu
Sadan tokko ta’uu isaanii hin caqasu
Waanta isaan Ergaa Ximooxiyoos ffaa : irratti godhan ilaala. Kitaabni Qulqulluun akkas jedha,
"Nama Waaqayyoo ta’uu keessayyuu dhoksaa guddaan akka jiru amanamaa dha:" – Kana ilaala –
“Waqayyoo foon dhuffatee mul’ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf. Ergamtoota waaqayyootti argameera, Saba biyya lafaa keessattis lallabameera.
Guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera, Ulfinaan ol fudhatameera. "
Biyya lafaa keessatti kan itti amaname Waaqayyo dha, ulfinaana kan ol fudhatame Waqayyo dha.
Kan foon uffatee nu gidduu jiraate Waaqayyo dha.
Yesuus kiristoos ta’uu Macaafni qulqulluu Ergaa Ximootiwoos ffaa : keessatti ifatti lafa kaaheera.
- Ergaa Ximootiwoos ffaa : keessatti, Kitaaba Qulqulluu New American Standard jedhu booda immoo Maxxansa Idil Addunyaa Haaraa (NIV) keessatti yaadannoowwan minjalatti barreefamaniifi barreefamoota biraa kanan
Seeminarii keessaa argadhe dubbise
barreefama faayidaa qabeessa kan ani yeroo hundaa dubbisu dha.
Yaadannoowwan minjalaa ykn bakka yaadatti kennan keessatti kan jedhaman ykn barsiisni isaanii
Kan Maxxansa Idil Addunyaa ykn Kitaaba Qulqulluu “New American Standard” irraa fudhataman akkas jedhu,
Sirna amantaa irratti adda addumaan hin jiru. Ilaalcha amantaa hin miidhu.
Garuu ifatti adda addummaan jechoota "hos" fi "Theós" gidduu ni jira.
Isin “Inni Waqayyoo ta’uu isaatiif inni "Theós" ture kan jedhu dhiistanii ‘hos’ kan jedhu kan fudhatan yoo ta’e ,
Kun ifatti jechichi ykn barreefamicha humna isaa ni dadhabsiisa. Sababni isaa isin Kiristoos Waaqayyo ta’uu isaa
ykn Inni foon ufachuu isaa amanuu qabdu. Garuu "Theós" jecha keessatti waanta barreefamichi jedhu kan nama ajahibu hin jiru
Inni Waaqayyoo foon ufatee mul’ate dha.
Innis Kiristoos dha kann jedhu yoo ta’u kunis namootni Waaqummaa Gooftaa Yesuus irratti amantaa qaban irratti dhiibaa ni qabaata.
kunis namootni Waaqummaa Gooftaa Yesuus irratti amantaa qaban irratti dhiibaa ni qabaata. -Sirrii dha miti.
-Yesuus Kiristoos Waaqa ta’uu isaatiif mirkaneessi ol’aanaan kan biraan Ibroota : dha.
Garuu Waa;ee ilmaa "Teessoon kee yaa waaqayyoo, baraa hamma baraatti.” Jedheera.
Kitaabni Qulluun achittii eenyuun Mucaa jedhee waame?
Kitaabichi isaatiin Waaqayyo jedhee waame. Waa’ee ilmaa, "Teessoon kee yaa waaqayyoo, baraa hamma baraatti.” Jedheera.
Maxxansa Idil Addunyaa haaraa ageefadha.
"Garuu waa’ee Mucaa isaa akkas jedha "...
-Dhiyyoo kana buufata baaburaa keessatti nama ragaa bahaa waaqayyoo (Jehovah’s Witness) ta’eetti odeessaan ture – Ani niitii koo fudhachuu akka deemuun itti hime.
Namni ragaa bahaa Waqayyoo kun waa’ee kitaaba ka’annaa isheen qabdu naaf dubbisuu eegale.
Garuu ani Hiikaa Addunyaa haaraa isheen qabdu argeera.
Kanaafuu, ani akkasi jedhe “Hiikaan Addunyaa haaraan Giriikii dhufee?"
Isheenis akkas jette, “Kakuu Haaraa Westicotti fi Hort Girikii dha”
Anis, “Inni sirrii dha?” jedhe
Isheenis, “Marree” jette.
Anis, “Kitaaba isa Giriikii ni qabdaa” jedhe. Isheenis “Lakki” jette.
Anis, “Jaahovaah mataan isaa Yesuusiin dubbisee Isaatiin ati Waaqayyodha yoo jedhe maal goota? isheetiin jedhe.
"Kun gonkumaa hin uumamu."
Kanaafuu ani lakkoofsa Ibroota : akka dubbistu itti hime. "Waa’ee ilmaa akkas jedheera,
"Teessoon kee yaa waaqayyoo, baraa hamma baraatti."jedheera.
Isheen baay’ee tokko ajaa’ibatee hedduu aartee, kofoo ishee fudhatee balbala bantee baate.
Ani ishee hordofee balbala faana gadi bahee ishee wajjin odeessan ture.
Garuu yoon booda dhimmumma kana Kitaaba Hiikaa Addunyaa haaraa irraa dubbisu, guutummaa guutuutti jijjiirameera.
-Kitaaba King James keessatti garuu isin dhimma kana akka malee hin hubatan. Garuu sana qofaa miti,
Garuu isaan Kiristoos dubaroo irraa dhalachuu isaa ni haalu ykn ni haleelu. Loqaas : ilaala.
Macaafni Qulqulluu akkas jedha, "Yooseefiifi haati waantoota isaanitti himameetti baayyee dinqaman”
Maxxansaan Idil Addunyaa Haaraa (NIV)’n gama biraatiinniifi ESV fi Hiikaan “The New Living Translation”
Akkas jedhu, "Abbaafi haati mucaa waanta isaanitti himametti baayee dinqaman.”
Sirrii dha. Maxxansaan Idil Addunyaa Haaraa fi maxxansaawwan hammayyaa biraan
Yooseefiin abbaa Yesuus Kiristoos jedhanii waamu. Kitaabni qulqulluu King James
Kana akka hin gooneef baayyee of eegatu.
-Yooseef abbaa Yesuus Kiristoos dha? Lakki, inni miti.
Inni abbaa budeenaa Yesuus Kiristoos dha. Ani isa isiniif kenna.
Garuu, Inni abbaa Yesuus Kiristoos miti.
-Dhugumatti, boqqonnaa kana keessa gara duubaatti, Maariyaam Yooseefiin abbaa Yesuus jettee caqasti.
Inni bataluma ishee sirreessa. Akkas jedha, “Yeroo isa arganitti ajaa’ibaman:
Haati isaa isaatiin, Ilmaa koo, maaliif nu filate?
Ilaala abbaa fi ani gadda sadii agareera. "
Kanaafuu, Isheen Yooseefiin abbaa Yesuus jettee hin waamneeree? Akkatti inni dafee ishee sirreessi ilaala.
"Innis akkas isaaniin jedhe,
Akkamiin akkas naan jetta? Ani yoon waa’ee abbaa koo kadhadhu hin hubatu?
Yooseef abbaa koo wana hin taaneef yeroon Sagalee Waaqayyoo lallabutti waa’ee abbaa koo nan kadhadha” jedheera.
Waaqayyoo abbaan abbaa kooti. "
Namootni Maxxansa Idil Addunyaa Haaraatti amanan baayyee jaamaniiru. Ani namoota kana argahde akka kana natti argisiisan gaafadheera.
"Argitanii? Kun Kitaaba Qulqulluu Yooseefiin Abbaa Yesuus dha jedhudha. “
Lakki, Maariyaamitu Yooseefiin Abbaa Yesuus jedhee waame.
Garuu isheen bataluma sirreefamteetti. Namni Kitaaba Maxxansa Idil Addunyaa Haaraa nama sirreessuu barbaachiisa.
Namni Kitaaba “New Living Translation” sirreessu barbaachiisa.
Nama tokko ESV sirreessu qaba. “Daqiqaa tokko na dheegi. Ati sirri miti.
Inni abbaa Yesuus miti. Abbaan Yesuus Waaqayyo abbaa dha. "
“Gaarummaan isaa kitaabootni kunneen hubachuuf salphaadha.
“Gaarummaan isaa jijjiiramootni kunneen amantaa hin jijjiiran” ni jettu.”
Isaan kun amanataawwan faayidaa qabeessa dha. Miti?
Waaqummaa Kiristoos, Dubaroo irraa dhalachuu
Sana qofaa miti; Inni bara baaaf jiraachuu irratti haleellaa gadhiisu. Ilaali, Yesuus Kiristoos dallaa Beetiliyeem
Yesuus Kiristoos Gadameessa Maaramii keessatti hin dhalanne.
Kana irrayyuu Yesuus Kiristoos yeroo hunduma jira; gara fuulduraattis ni jiraata.
Inni kan duraa fi kan xumuraadha. Inni Alfaa fi Omeegaa dha,
Inni jalqabaa fi kan xumuraa dha. Sunis waaqummaa isaatiif murteessa.
Inni uumama yoo ta’e, Inni waaqa ta’uu hin danda’u.
Macaafa qulqulluun Mikiyaas : irratti akkas jedha, "Atii Beeteliyeem Efiraataa,
Kumaatama Yuhudaa keessaa tokko akka taatuuf eegoo dha. Si keessaa
Garuu bahumsi isaa dura irraa eegalee, kan bara baraa irraa kan ta’e, Isiraalifis mootii kan ta’u naaf baha,”
- Kana ilaala – “Kan bara baraa irraa kan ta’e”
Mikiyaas : keessatti, Macaafa Qulqulluun akka nutti himutti, Yesuus Kiristoos“Kan bara baraa irraa kan ta’e” dha.
Jecchootni kunneen jechoota baay’ee baay’ee humna qaban dha. Sabani isaas Yesuus Kiristoos Bara baraaf kan jiraatu ta’uu ni mul’isu.
Inni jalqaba hin qabu. Inni uumama miti.
Inni Waaqayyo foon uffatee mula’ate dha. Inni durumaanuu Waaqayyoo wajjin ture; inni Waaqayyoo dha.
Amma, “bara baraa” jechuun inni barba baraaf ni hojjeta. Bara baraaf ni jiraata.
Kanaafuu “Kan bara baraaf ta’e" jechuun kanaan dura kan jiru ta’uu irraa
Ykn yeroo kanaan dura darbe daangaa kan hin qabne ta’uu, kann bara baraaf jiraate irraa kan madde dha.
Kan Maxxansaan Idil Addunyaa Haaraa (NIV) jedhu dhagahi:
"Gara "Atii Beeteliyeem Efiraataa, Kumaatama Yuhudaa keessaa tokko akka taatuuf eegoo dha. Si keessaa
Garuu bahumsi isaa dura irraa eegalee, kan bara baraa irraa kan ta’e,
Isiraalifis mootii kan ta’u naaf baha,”
Amma, jalqaba jechuun maal dha?
Yeroo waanti tokko itti eegalu jechuudha, mitii?
Yeroo waanti tokko eegalamu, yeroo waanti tokko jiraachuu eegalu jechuu dha.
Ilaala, Yesuus bakka tokko irraa eegalee jiraachuu eegalee?
Lakki, Kitaaba Qulqulluu King James keessatti Inni kan bara baraaf jiraatu dha.
Garuu akkaataa Maxxansaa Idil Addunyaa Haaraatiin Inni jalqaba qaba.
Yeruus Kiristoos jalqaba kan qabu yoo ta’e inni Waaqayyoo miti. Sababni isaas
Waaqayyoo duraan kan turee fi ammas kan jiru fi kan dhufu dha. [Mul’ata :]
Waaqayyo yeroo hunda ni jira.
Waaqayyo uumama miti.
Garuu Kun iddootti Maxxansi Idil Addunyaa haaraan waa’ee dibataa itti dabarsu dha:
-Isaayaas : akkas jedha: "Akkamiti jannataa citee buutee,
Amantaa kan hin qabne"...
-Macaafa quqlulluu guutuu keessatti jechi “Urjii ganamaa” bakka tokko qofaatti Mul’ata. Yeroo tokko qofaa.
Assitti nuti maqicha Seexana irra keenya; Urjii ganamaa jennee isa waamna,
Nuti karaa irra deemnee “Amantaa kan hin qabne eenyudha? Cubbuun akkamitti hojjetama? Jennee otuu gaafannee
Isaan hundi isaanii akkas nuu jedhu, “Seexana dha” jedhu. "
Amantaa kan hin qabne eenyu akka ta’e ni beektu?
-Ergamaa Waaqayyoo kan Jannataa gadi darbatame, Seexana dha.
-Inni Seexana dha.
-Tolee, Eenyu dha kan Amantaa hin qabne?
-Kun gaaffii salphaadha. Ani nan beeka. Inni sirriidha.
-Maqaan Seexanaa Urjii ganamaa ta’uu kan itti beeknu inni qofaan
sababa Isaayaas : dha.
"Ati urjii ganamaa, akkamitti Jannataa kufta," – Amma ani akka isin hubatan kanan barbaadu
Kun maqaa isaa fi aankii isaa - "Ati Ilma Urjii ganaaa!"
So what's the title of Lucifer? "lma Urjii ganamaa ", Sirri dha?
Mul’ata Boqqonnaa Boqqonnaa lakkoofsa Kitaabni King James akkas jedha,
"Ani Yesuus isiniin waantoota kunneeniin batasakaan keessatti isin qoruuf ergamaa koo isinitti ergeera.
Ani –“Kun Yesuustu dubbata-Ani hiddaa fi ilma Daawiti dha” ,
- Kun Yesuus kan dubbatu – “urjii calaqisaa fi ganama dha.”
Yesuus eenyu jedhee of waamaa ture? Urjii ganamaa.
Kun ittiin waama isaati.
-Kitaabni Qulqulluu kan King James fi Kan NIV Mul’ata : keessatti akkas jedhee ibsa
Yesuus Kiristoos Urjii ganamaa dha.
-NIV urjii ganamaa kan jannata irraa bu’e akkamitti waama?
-"Ati akkamitti jannataa cittee buuta, urjii ganama, ilma barii! "
Kitaaba NIV Isaayaas : keessatti Urjiin ganamaa ykn cubbamaan Jannataa irraa darbatamuu irra
Yesuus akka Jannataa darbatameetti ibsa.
Amma ilaala,Cubbamaan Seexanni hogganaa hunda ta’uu barbaachuu isaa irraa kan ka’e
akka waaqayyoo ta’uu barbaachuu isaa irraa kan ka’e jannata irraa darbatamuu isaa nu barsiisa.
Ilaalaa, NIV’n erga waaqummaa Kiristoos xureessee booda, duraanuu kan jiru ta’uu isaa erga haalee booda,
Inni dubaroo irraa dhalachuu isaa erga haleelee booda,
Inni jalqabaa kan hin qabne ta’uu, inni xumura kan hin qabne ta’uu, Inni Waaqayyo foon uffatee mul’ate ta’uu erga qeeqee fi haleelee booda,
Amma Yesuus Kan hunda caaluu barbaadeetti ni himaata. Inni kan hunda caalu dha!
-Akkaataa Maxxansa Idil Addunyaa Haaraa keessanitti, Seexana utuu hin taane Yesuusitu Jannataa darbatame!
-Namootni maxxansoota kunneen duuba jiran kanneen Seexana hordofan dha.
Seexanni jechichi Edeen keessatti akka dabu barbaada.
Nuti waa’ee gochoota isaa kana ni beekna. [Qoronxoos ffaa :]
Ilaala, Jechi Waaqayyoo humna guddaa qaba.
Kitaabni Qulqulluun kan Ibrootaa :, "Dubbiin Waaqayyoo saffisaa fi humna qabeessa;
Billaa gar lamaan qarame caalaa qara qaba;
Inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargar ni baasa,
Yaadaa fi akeeka namaas qoree faraduudhaaf ni danda’a. "
Seexanni nuy Kiristaanootaan tokkommaa keenya addaan baasuu dandeenyaan nu mo’achuu akka danda’u ni beeka.
-Kaayyoon isaa yeroo hundumaa meeshaa waraanaa keenya tokkummaa dhabsiisuu dha.
Seena ilaala. Namootni Seexana ta’an garee namoota muraasaa isin beektanii qabachuu ykn abboomachuu barbaadu.
Abboommii jala oolchachuu maaltu durasa? Namoota meeshaa isaan qaban dhabamsiisu ykn hiiksiisu.
Ilaala, Mootummaan akka jedhee isinitti himuu barbaada, "Nuti meeshaalee waraanaa keessan hiiksiisuu barbaadna.
Sababni isaas nuti eegumsa isiniif goona.”
Beektu, yoo namni tokko meeshaa keessan isin irraa fudhachuu barbaade, isin eeguuf yaalii hin godhu.
Yoo isin irratti miidhaa geessise
isin debiftanii waraanuu akka hin dandeenye mirkaneefachuuf yaalii ni godha,
Bara keessa Biyyi Gamtaa Soofiyeet ykn Ruusiyaan seera to’annoo qawwee baaftee ture. Bara fi gidduutti,
Mormitota ajaja Miliyoona ajjesamaniiru.
Bara keessa, Jarman To’annoo Qawwee baaftee ture. Uummata isaa hidhannoo hiiksiseera.
Bara fi gidduutti lammiileen Jiwishiifi kanneen biraan ajjesamaniiru.
Bara keessa Chaayinaan to’annoo qawwee taasiisuun uummata isaa hidhannoo hiiksiisuu eegale.
Bara fi gidduutti,
Mormitootni siyaasa Miliyoona Chaayinaa keessatti ajjesamaniiru.
Bara keessa Ugaandaan to’annoo meeshaa baastee uummata ishee meeshaa hiiksiisuu eegaleera.
Bara fi gidduutti – kana qabadha- Kiristaanootni , ajjesamaniiru.
Bara keessa Kaamboodaan to’annoo meeshaa baastee uummata ishee meeshaa hiiksiisuu eegaleera.
Bara fi gidduutti lammiileen Kamboodiyaa Miliyoona ajjeesamaniiru.
Isin kana hubachuu qabdu: diinni meeshaa waraanaa keessan fudhachuuf itti fufiinsaan yaalii godha.
Kana kan godhu isin irraa diina ittisuuf miti, garuu akka isin of irraa isa ittisuu hin dandeenyeef dha.
-Abbootiin irree Seexana ta’an uummatni akka humna of irraa ittisuu hin qabanneef yeroo hundumaa meeshaa akka hiikatan ni godha,
Kanaas kan godhu isaan garboomsuuf dha. Mootummootni uummata irraa meeshaa yoo hiiksiisuu yoo danda’an
Isaan gocha hacuuccaa isaan irraan gahan of irraa ittisuu akka hin dandeenye ni beeku.
-Maaal jedha? Dubbii Waaqayyoo irratti yeroo ammaa haleellaan gaggeefamaa jiru ni jiraa?
Marree ni jira. Sabaabni isaa yoo Seexxanni waanta isin ittiin isa miidhuu dandeessan,
kan isin waraana keessatti isa ittiin falmatan yoo isin hiiksiise,
Inni isiniin meeshaa keessan isin hiikachiisuu dandeenyaan, sanaa booda akka salphaatti isin abboommii isaa jala isin oolchata.
-Seexanni billaa qaralamaa kan Kitaaba Qulqulluu King James keessa jiru halra keenya irra jiru nurraa fudhatee,
haaduu mucucaataa NIV jedhamuun bakka buusaa caalaa kan jaalatu hin qabu.
Haaduu mucucaataa ESV jedhamuun bakka buusuu caalaa kan jaalatu hin qabu.
Haaduu mucucaataa King James Haaraa jedhamuun bakka buusuu caalaa kan jaalatu hin qabu.
Inni akka nuti hidhannoo qabaannu hin barbaadu. Inni hoggantoota addunyaa dukkanaahaa kana wajjin
Waraana akka banuu dandeessan hin barbaadu.
Tasaloniiqee ffaa boqqonnaa lakkoofsa akkas jedha, "Waaqayyoon Mormanii isa irratti ka’uun utuu hin dhufiin,
Inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun otuu bakkeetti hin baafamiin
Guyyaan sun hin dhufu, kanaaf namni tokko karaa kam ille isin hin wallaachisiin ".
Kanaafuu Kitaabni Qulqulluu kan nutti himu ...
-Mormaan Kiristoos irratti ka’u otuu hin dhufiin dura, mootummaan addunyaa tokkoo otuu hin dhufiin,
Ajajni addunyaa haaraan otuu hin dhufiin dura, bakkeetti bahuu ykn addaan bahuun dura dhufuu qaba.
Bakkeetti bahuun maal dha? Appoostaasii.
-Maxxansaawwan Kitaaba Qulqulluu hammayyaa kunneen karooraa Seexanni
Amantaa addunyaa tokko, mootummaa addunyaa tokko, ajaja addunyaa tokko hundeessuuf qabuutiif furtuu dha.
Kitaabni Qulqulluu akkas jechuun nuti hima, Kiristoos lammata dhufuu Isaatiin dura bakkeetti bahuu cimaatu jira, “apostasia”
Bakkeetti bahiinsa cimaa Kiristoosa lamata dhufuun dura numudatu
Sababa maxxansawwan Kitaaba Qulqulluu sobaa fi hammayyaa kunneenii
Kan Dubbii ykn jecha waaqayyoo dabsaniifi jijjiiran
fi sirnoota amantaa Kiristoos jijjiiran kana irraa kan maddu dha.
-Ani kan jedhu Manxansaawwan kunneen Kitaaba Qulqulluu keenya keessa dogongora galchaa jiru, sanaa booda namootni Kitaaba Qulqulluu ni shakkuu ni eegalu,
Namootnyyoon shakkuu eegalu, isaan haala ufaatama uumamaa (Evolution) ni amanu,
Isaan waantoota kana hunda ni amanu. Waanti inni gochaa jiru, Mootummaa addunyaa tokkoo babbal’isaa jira.
Maaliif? Sababni isaa inni waa’ee bakkeetti bahuu babbal’isuu irratti Mul’ata.
-Wanti namatti tolu yeroo namootni kunneen yeroo mara waa’ee mootummaa addunyaa tokkoo ykn amantaa tokkoo kan dhufaa jiru dubbatan
Isaan yeroo isa dubbatanitti
Ajaja addunyaa haaraa jedhanii dubbatu. Sirrii miti? Kanaan dura eenyuttu jechicha dhagaheera:
“Ajaja Addunyaa Haaraa "?
-Inni yaada gudda dha, ajaja addunyaa haaraa.
-Isaan mana yeroo galan gara meeshaa waraanaa hidhannoon isaa qophii ta’e manaa qabu.
-Inni ajaja addunyaa isa haaraa dha ...
-Nuti akka isaan ajaja addunyaa gosa kanaa akka uumamniif tumsa isaaniif gochaa jira.
Kanas nuti hundi ilaaluu kan qabnu natti fakkaata.
-Kaan amma yoona dhagahaa turre irraa sirni addunyaa ni uumama jettanii ni abdatuu?
-Kun kan uumamu taanaanifi kun dhugumatti, hojitti jijjiiramnaan …
-Namootni yaada kana duuba jiran mootummaa addunyaa sana barbaadu
Sammuu isaanii keessatti kun tarkaanfii gara sanaatti taasifamu dha.
-Meeshaa warnaanaa to’achuun, hamma isaa to’achuu, xumura irrattis
Gabaa to’achuu jechuu keessanii?
-Xumura irratti hunda keenya to’achuu dha.
-Waanti namatti tolu kunoo dha. NIV’n waa’ee dhufaatii Kiristoos ilaalchisee jecha “ajaja haaraa” jedhu akka fayyadamu ni beektu?
Kitaaba Qulqulluu King James keessatti Ibroota : akkas jedha, "Isaan kun waa’ee nyaataa fi dhugaatii,
waa’ee yeroo gara garaatti of qulleessuufi of dhiquu waan ta’aniif, seerota namummaa isa duubaatiif kennamanii
hamma seerichi haara’utti hojjetan dha. "
Amma, inni waa’ee waanata yeroo darbe uumame dubbata, sirrii mitii?
-Haaromsi seeraa yerichaa dhufaatii Yesuus Kiristoosiitiif mallattoo dha.
Amma isin kana hubachuu qabdu. Inni sun Yesuus Kiristoos dura dhufuu isaatiif mallattoo dha.
Nuti kanaa booda waa’ee foonii, waa’ee nyaataa fi dhugaatii, yeroo gara garaa of qulqulleessuuf of dhiquu fi ajaja foon keenyaa raawwachuu hin dalagnu.
Nuti kanaa booda kanneen keessaa isa kamiyyuu hin raawwannu Maaliif? Sababni isaa barri haaromsaa dhufeera.
Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufeera.
-NIV dhaggeefadha: “Hanga ajajni haaraan dhufti danbiiwwan alaa ni hojjetu.”
Isin Kitaaba Qulqulluu NIV keessaa dubbii lakkoofsa yoo dubbistan,
Waanti gara fulduraatti dhufu jira kan jedhu fakkaata.
Ajajni haaraan dhufaatii Kiristoos tokkoffaa miti,
dhufaatii Kiristoos lamaffaan kan ajaja addunyaa jedhame dha.
Kitaabni qulqulluu “The Good News Translation” akkas jedha:
"Kunneen danbiiwwan alaa hunda kan hanga Waaqayyo ajaja haaraa baasuutti qofa hojjetan dha.”
Kitaabni “The New English Translation” jedhamus ajaja haaraa ittiin jedhe waama.
Kitaabni qulqulluu “The Common English Bible” ajaja haaraa jedhe waama.
Yeroo ammaa Ameerikaa keessatti kitaabni qulqulluu baay’ee gurguramu
Dhufaatii Kiristoos ajaja haaraa jedhee waama.
-Akkam akka ta’e tilmaama. Kan Kiristoosiin mormu ni dhufa; yeroo inni dhufu
yeroo ajaja haaraa ta’a.
Garuu suni waanta Ibrootni odeessan miti.
-Uumatni Mormaa Kiristoos akka fudhataniif qopheessuuf, gara ajaja addunyaa haaraatti akka isaan hawwatamaniif qopheessuuf,
namootni mootummaa addunyaa kanaatiin akka goomsamaniif qopheessuuf, sirna addunyaa kanaa tokko kan Kiristoosiin mormu uumuufi
mallattoo uumamaa argachuuf
ayyaantummaan kitaaba qulqulluu kan miidhan
kitaaboota qulqulluu haaraa ta’an kana keessa hedduutu jiru.
-Haa jennu, "Paasteer Jimeneez, isin daandii karoora xaxxamaa kana irra deemtu haa jennu.
Isin Ajaja Addunyaa Haaraatti ni amantu?"
-Kana yaaduun maraachuu isinitti fakkachuu ni danda’a. Ogeessootni Baankii fi namootni
mootummaa addunyaa tokko fiduu barbaadan ni jiru?
Isin kitaaba Mul’ataa akka dubbistanii beektan hin beeku. Garuu Kitaabni qulqulluu akkas jechuun nutti hima,
Mormaan Kiristoos Mootummaa addunyaa tokkoo fiduuf deema.
Mormaan Kiristoos amantaa addunyaa tokko fiduuf kan deemu ta’uu Kitaabni qulqulluu nutti hima.
Sun kan namootni jedhan irraa kan fagaatu natti hin fakkaatu,
"Oh, Baankootni ajaja addunyaa haaraa
Mootummaaa addunyaa tokko wajjin uumaa jiru."
Amma isaan namoota falaafama heexoo kana ni beektu jedhanii yaadu.
"Oh, baankoota dha; Inni kana dha."
Garuu Mormaan Kiristoos waanta walfaaktu kan fidu ta’uu
Kitaaba Qulqulluu keessatti ni beekna.
Sin kan Kitaabni qulqulluu jedhu dha.
Jannata Eeden irraa eegalee Dubbii Waaqayyoo irratti haleellaan taasifameera.
Kitaabni qulqulluun guutummaa guutuutti otuu hin barreefamiin dura Dubbii Waaqayyoo irratti haleellaan gaggeefamaa ture.
Kun hara jijjiirameera jettanii yaaduu?
Isin kana hubachuu qabdu. Hara’a Dubbiin ykn Jechi Waaqayyoo haleellaan irratti banamee jira.
Maxxansaawwan Kitaaba Qulqulluu kanneen haaraa Kitaaba Qulqulluu King Jame irraa ifatti adda dha.
Isin gaaffii kana of gaafachuu qabdu: Maaliif?
Adda addummaa kana hubachuuf, seenaa Kitaaba Qulqulluu isa Afaan Ingiliziitiin qopha’e hubachuu qabdu
Magaalaa Phhoniksi keessa Muuziyeemiin ykn godanbaan Kitaaba qulqulluu
Kan kitaaboota qulqulluu afaan Ingilizii baayyee hin argamne hedduuminaan walitti qabuutiin addunyaa irraa isa guddaa ta’e kan jiru yoo ta’u Daayireektarri muuziyeemiin kanaa
Iyyuu’eel Laampee maxxansawwan Kitaaboota hedduminaan hin argamne kanaa
Hanga King Jamse itti jirnaiifi King James mataa isaa nu daawwachisaniiru.
Inni waa’ee seera Kittaaba Qulqulluu King James keenyaa nuuf ibsa.
Inni daandii Kakuu Haaraa Giriik kan Eeraamas irraa,
Hanga isa muummee “the original Textus Receptus” kan jiran nutti dhagarsiisa,
Inni dabalataanis seenaa Kitaaboota Qulqulluu Ingilifaa kunneen nuti hima.
Deemsi kunis hanga Maxxansa King James itti kan jiru nu daawwachiisa.
Kanaafuu Eraasmaasiitiin ni eegala.
-Paasteer kan isin minjaala ykn teessoo irratti agartan walumaagalatti
Seenaa Kitaaba Qulqulluu King James dha.
Amma yaadadhu, Kitaabni qulqulluu King James kun bara keessa kan maxxanfame ta’uufi
Kitaabni kun kan Afaan Ingilifaan dura maxxanfame jedhame hubannoon dogongoraan beekamu ni jira.
Tole, Inni isa duraa miti. Fakkeenyootni kitaaboota qulqulluu Ingilifaan bara dura maxxanfaman jiru.
Akkuma isin jettan waanti isin asitti argitan Kitaaba qulqulluu isa Muummee Afaan Giriikiitiin “Textus Receptus”,
jedhamu kan Iraasmas Biyya Rootardaam irraa barreefameen eegala,
Kun waanta nuti seenaa bataskaanaa ykn waldaa fi addunyaa biyya lafaa keessatti beeknu hunda sirritti jijjiireera.
Kitaabni kun “the Erasmus of Rotterdam's Greek/Latin New Testament.” Jedhamee waamama,
Tole, Eraamees jennee isaa haa waamnu:
Nama gaarii amma yoonaa bakka bu’aan hin argamneef, kan waaqummaa hin qabne.
Yesuus nama gaarii hamma ammaatti dorgomaan hin argamneef dha. Salamonis akkasuma, garuu ammayyuu
Hundaa ol Eeraamas kan dorgomu akka hin jirreetti yaadna. Saayinsii, barnoota sirna amantaa, falaafama keessattis ta’e,
Inni baay’ee cimaa ture.
-Kun kitaaba “Textus Receptus” isa muummee dhaa?
-“Textus Receptus” isa muummee dha.
-Maaloo mee ilaala.
Akka waliigalaatti akka kitaabba baay’ee faayidaa qabeessa ta’e sanaa booda kan isa dorgomu hin mannafamneetti yaadama.
Kun kitaaba haaroomsa labsu dha.
Namni hin amanne, isin, illee, kitaabba baay’ee faayidaa qabeessa ta’e sanaa booda kan isa dorgomu hin mannafamneetti ta’uu mirkaneessitan.
Haaromsi kana irraa bahe. Dhugaan kun kitaaba kana irraa dhufe.
Kitaabni kun hangam aangoo qabeessa akka ta’e ni argina garuu rakkoowwan hedduu uumeera.
Kana yeroon jedhu maal jechuu koo dha?
Tole, Maallaqni gara Roomaatti dhangala’uu dhaabbateera. Gamoon ijaaramaa jiru jira.
Miidhagsaan mana keessaa baay’ee baay’ee beekamaan gamoo kana akka miidhagsuuf qaacaramee ture.
Ani waa’ee bataskaana Sistaayinii Vaatikaanii, kan Mikaa’eelanjeelloo jedhamee waamamu jechaan jira.
Maallaqni yaa’uu dhaabbateera. Bataskaanni yaada namootaa irratti daangaa kaahuu eegalte
Akkasis jette, "Isin kana barsiisuu hin dandeessan, Eeraamees jedhus kuni sirrii nutti hin fakkaatu.”
“Nuun rakkoon nu mudateera, ”
Kun 'metánoia' jedha, ‘adabbii kanfali” kan jedhu miti. Nutis dhimma amantaa kana irratti xiyyeefachuu qabna.
Garuu sochiin pirooteestaantii kitaaba kana keessaa dhalate.
Sochii ykn warraaqsi pirooteesatnii jechuun qabatamaatti maal jechuudha?
-Maxxansaa isin na dhagarsiisaa jirtan kana keessatti, Eeraamas Afaan Laatinnii Bataskaanni itti fayyadamtu cinatti Afaan Giriikii isa muummee kaheera.
Kun immoo lamaan gidduu waldhabdee jiru arguuf baay’ee baay’ee saphaa dha.
-Sirriidha? -Kanaafi dha inni wanta hunda kan jijjiire.
Sababni isaas waanta nutti dogonngorree fi waanta ta’uu qabu ture nutti agarsiiseera.
Garuu inni hamma dhiyootti waanta inni taa’uu qabu agarsiisuuf hin hiikne.
Kunis hanga tti hin ture.
-Kanaafuu, kunneen waantoota walfaalleessan lamaantu walcinaa jira.
-Waanti inni godhe yoo jiraate raagicha itti argisiisuudha
-Maxxansaa doongoraan Laatiniitiin barreefame kan bataskaanichaa fi inni Muummee Afaan Giriikiitiin barreefame “Textus
Receptu”|, inni lamaanu walcinaa kahee dubbsiaan
Murtii itti kennu godhe.
-garuu kun rasaasa bu’uuraa, haala bu’aa qabeessa ta’een bataskaanicha kan ajeessedha.
-Kan isin asitti argitan kan nuti yeroo ammaa Kitaaba Quluqulluu maxxansaa tokkoffaa abbaa haguuggii jennee beeknu dha.
Inni qabatamaatti hojii Wiiliyaam Taayinidaal dha. Amma akkuma nuti beeknu
Wiiliyaam Taayinidaal Afaan Ingilizii nuti har’a dubbannu kan argate ykna kalaqe dha. Inni dabalatanis kalaaa He's also the inventor
Kitaaba qulqulluu afaanoota muummee irraa kan hiikame Kitaaba Qulqulluu kan duraa Afaan Ingiliziitti hiikame dha.
Taayindaale Ingiliizi keessatti waanta Luuteer Jarmaan keessatti gochaa ture gochuu barbaadee ture.
Inni lafa jala deeme. Deegarsa mana kitaabaa Luuteeriitiin kitaabini amma isin asitti agartan
Fi maxxansaawwan hojii Eraasmas kanneen boodaatiin, Taayinidaal Kitaaba qulqulluu kakuu haaraa isa duraa baaseera.
Seenaa Ingilizii keessatti kitaaba baay’ee barbaadamaa ture ta’eera.
Mootichis waanti kun gubatu barbaada.
-Yeroo Tindaal Kakuu haaraa bara tti baaseetti Ingilizii to’annoo bataskaana Kaatoolikii jala turte.
-Kitaabni kun bu’uurumaa arabsoo bataskaana hundeefamee jiruu ykn
bataskaana kaatoolikii Loondoon ture.
Kun galma baay’ee ol’aanaa ta’e. This became a monumental achievement because Tyndale, in the last years of
Sababni isaas Taayinidaal kitaaba kana
baasuuf bara jireenya isaa Afaan Ibiraayisixi fi Giriikii irraa hiikuu irratti dabarse.
-yeroo kitaabi kun baheetti kakuun moofaa kan hafe, gar tokkoo isaa,
isaan Orijinaala Ibiraayisixii irraa argatanii hojjechuu hin dandeenye ture.
Tole, lakki, sababni isaa Taayindaal bara to’annoo jala oole.
-Inni guyyoota tiif manaa akka hin bane adabamee ture. Achii booda
Gaafa Onkolooleessa , , inni manaa fudhatamee gubate. Garuu, bara gubannaa sana,
Maayilees Kovardaal hojii Taayindaal eegalee ture xumureera.
Now what I love more than anything that we have in this room is this text here.
Kun kan ta’e bara ture. Nuti ka Wangeela Maatiyoos jennee waamna. Amma kun maal dha?
Kana xumuruu irra kan caalu kan biraan hin jiru.
-Amma yaada’u yeroo Taayinidaal du’e, akkuma isin duraan haala humna qabeessa ta’een dubbatanitti,
“Yaa Gooftaa, ijoota mootii Ingilizi bani.”
Kadhannaa sana keessatti maaltu ta’e?
Taayinidaal waantoota miliyoona jechuu danda’a ture.
Maaliif jecha xumura yeroo lubbuun nama keessa harattu balleessitu, “Yaa Gooftaa, ijoota mootii Ingilizi bani.”?
Taayinidaal Henerii ffaan hangam maraataa akka ta’e, that if he
Bataskaana Roomaa kan hundeefame cabsuuf inni Heeneerii ffaa otuu argachuu danda’eera ta’ee Ingilizi moo’amtee eegumsi godhamaaf ture.
Yesuus wajjin hariiroo dhuunfaa uumuun waan tokko.
Guyyaa guyyaatti ganama ganama name tokko ka’ee isin ajeessuuf otuu barbaadaa jiruu Yesuus wajjin hariiroo dhuunfaa uumuun waanta biraa dha.
Sun ergama isaanii ture.
Garuu xumura irratti Heneerii ffaa Kitaabni qulqulluun waan tokko irratti hunda’ee akka bilisaan deemu heeyyameera:
Jechootni kunneen lamaan ifatti Ingiliziitiin jijjiiranu.
Kitaaboota lamaan kana irraa isin Yesuus wajjin hariiroo dhuunfa dhugaatti qabachuu danda’eessu.
-Isin Yesuus Kiristoosiin akka araarsaatti gochuu irra bataskaana akka araarsituutti qabdu ture.
-Kan nuti hara’a bakka gaabbii fi dhiiftama jennee waamnu dha.
"Ani cubbuu waan hojjedheef, abbaa, naaf dhiisi.
Ergan yeroo xumuraaf gaabbii seene torbee lama ta’eera."
-Kuni bakka gaabbii kuffiseera.
-Inni cubbicha guutummaa guutuutti hambiseera ykn baaseera. Sana booda hin barbaachisu.
Isin adabbiin kan isin irratti fudhatame
Sababa yakka isin waaqayyo irratti raawwataniif namni isinitti himu jiraachuu hin qabdan.
Sanaa booda Kitaaba Qulqulluu Ol’aanaa ykn Kitaaba Qulqulluu jennee kan har’a waamnu
Mootii Ingilizii kan ta’an Heneerii ffaaatin kann heeyyamame dha.
Waanta baay’ee yaadachuun nama aja’ibsiisa.
Maxxansi hojii Eeraasmas inni boodaa nama Beezaa jedhamuun hojjetame.
Hojii kan biraa baay’ee beekame, hojii Isxifaanoosiin hojjetame dha.
Yeroo ammaa Isxifaanoos faayidaa qabeessa dha. Sababni isaa inni Giriikii nuuf kenne.
Kitaaba qulqulluu Jeneevaa ykn Kitaaba qulqulluu kan Foyyeessitoota Joon Kalviiniin hojjetame nuuf kenne.
Wiliyaam Wittiinngihaam, Namootni sun, isaan barreefama Afaan Giriikiitiin hojjetame
kan Kitaaba Qulqulluu Jeeneevaa jenee har’a waamnu Kitaaba Qulqulluu Ingiliffaa isaaniitt hiikuuf fayyadamaniiru.
Amma, inni baayyee beekamaadha. Sababni isaais inni Kitaaba qulqulluu kan keewwata ykn lakkoofsaan adda baafame dha. Tole, Kitaabni qulqulluun Jenevaa baay’ee keenya biratti hedduu kan beekame kanaaf dha.
Kun akkasi, Yohaannis : eessaa dhufe?
Tole, inni kan dhufe…
-Isaan kitaabicha boqqonnaa fi lakkoofsotaan ykn keewwataan hiraniiru?
-Boqqoonnawwan kunneen acchuma turan.
-Isaan kitaabicha lakkoofasotaatti ykn keewwatootatti hiraniiru.
-Erga mucaan Heneerii ffaa aangoo qabatee booda isin argate. Nuti isaatiin amma Eediwaard ffaa jennee beekna.
Inni kan du’e umurii ijoollummaatiin dha. Inni aangoo irra kan ture waggoota afur ykn shaniif qofa ture.
Garuu yeroo sanatti, inni kitaabootni qulqulluu bilisaan akka deeman heeyyameera. Garuu inni
Mataan isaa haadha manaa fi ijoollee hin qabu ture, kanaafuu inni nama isa dhaalu hin qabu ture. Eenyutu
Aangoo fudhataree? Obboleettii isaa kan nuti har’a Meerii ishee dhiigaan laaqamte (Bloody Mary) jennee beeknu Nuti maqaa kanaan ishee hin waamnu
Sababni isaa isheenVoodikaa fi juusii timaatimaa fi cuunfaa Tabaaskoo jaalatti ture.
Nuti isheetiin Meerii ishee dhiigaan laaqamte jennee sababni ishee waamnuuf isheen du’a namoota mataa ishee , oliitiif itti gaafatamtuu turte.
Kun fakkeenya sirrii dha. Paasteer, bara Mootummaa Meerii kan dhiigaan laaqamtee Maatii ture.
Haadhoolii shaniifi abbootiin shan jiru.
Hundi isaanii utubaa biratti gubataniiru. Sababa maaliif?
Isin ijoollee isaanii kadhanaa Gooftaa afaan Ingiliffaan barsiisaniiru.
-Isheen akka isaan utubaa biratti gubatan goote.
-Isheen jalaala ykn fedhii Bataskaana Kaatooliikiif qabadan irraa kan ka’e, namoota kunneen ajeesteetti.
-Maatiiwwan ijoollee isaanii barbsiisaa turan.
-Tole. And Isaan bataskaanni akka isaan barsiistu qofaa barbaadan?
-Paasteer, nuti ijoollee keenya barsiisuuf barnoota gahumsa qabu hin baranne.
-Isaan bu’uuruma irraa manatti waan barsiisaniif utubaa biratti gubataniiru.
-Inni bu’uuruma irraa kan inni itti dhufe dha. That's basically what it came down to. Miira inni tureen.
Isaan seera guutuu barbaadan.
Tole, bara fincilaa sana, namootni abdii hin kunne, akka nuti fincila kaasnu murteessaniiru.
Maqaan isaanii eenyufaa ture? Joon Nooksi, Joon Fooksee, Wiiliiyaam Wittingimaam
Isaan Ingiliziitiin gadi lakkisanii Kitaaba haaraa biraandii ta’e hojjechuu deeman. Kitaaba kana hara maal jennaa?
Nuti sana Kitaaba Qulqulluu Jenevaa jenna.
-Tole, ach irraa “Kitaaba Qulqulluu Maatii” jedha, namtokko akkasi jedhaa kan barreesse ta’uu qaba.
-Eeyyeen inni sirrii dha. Inni dhugumattuu isa dha: Kitaaba Qulqulluu kan Maatii isa duraa
-Waanti nuti har’a, “the Textus Receptus” jennee waamnu dha, kitaabni kun kitaaba qulqulluu
“mana barumsaa manaa” kan yeroo duraa: Kitaaba Qulqulluu Jenevaa jennee waamnu baasuuf ooleera.
-Kun kitaaba galaana “Mayflower” irra deemedha.
-Inni Kitaaba Qulqulluu Magaalaa Jeemstaawoon kann tasgabbeesse dha.
Gocha shororkeessuu Meerii dhiigaan laaqamtee booda, ishen obboleettoo qabdi ture. Nuti maqaa ishee Mootuu Eelisaabeet jennnee beekna.
Laphee uummataa mo’uuf isheen Kitaaba Qulqulluu Phaaphaasii nuuf kennite.
Kitaabni kun “Phaaphaasootaan” hojjetame,
-Garuu isaan Kitaaba Quluqulluu Jenevaa cimsanii hojjetan.
-Isaan kn xiqqo caalaa aangoo fi dhiibbaa qabeessa ta’e akka ta’u barbaadan.
-Kun namoota isin amantan irraa kan dhufe dha. -Ogeessoota.
-Ogeessoota Ibiraa’isxii, Giriikii, garuu dhugumatti, inni gonkumaa uummata biratti tasgabbii hin fidne.
Inni hojii beekamaafi kabajamaa ture.
-Amma tokko inni waanna hin hubanne qaba ture.
-Inni batalummaa hin hubatamu.
-Waaqayyo waanti kana caalaa gaariin gubbaa irraa akka dhufee ture ni beeka ta’e.
- Sanaa booda isheen abbaa manaas ta’e daa’imman hin qabdu. Kanaafuu, eenyuttu aangoo mootummaa fudhata? nd then of course she didn't have a spouse; no kids. So who would take the
throne? Ilma adaadaa ishee Sikootlaand irraa. Marre, nuti Mootii Jeemsi jennee isa beekna.
Kitaabni qulqulluu guddaa, dheeraa kan isinitti dhiyyoo jiru, inni
Kitaaba Qulqulluu King James Maxxansa tokkoffaa dha. Achii waggaa tokkoo booda, inni uummatni
Kitaabicha akka dukaana kitaabaa keessaa akka bitatan kan heeyyame yoo ta’u isin
Kitaaba Qulqulluu Kakuu Haaraa King James isa duraa qabatanii jirtu.
Sanaa booda yeroo bara irra geenyu, Mootiin Jeemsi mootii ta’an. Mootii Jeems ffaa kan biyya Iskootlaandii.
Inni Mootii kann ta’e yoo ta’u kitaaboota qulqulluu barreefamanii jiran keessaa hiikaaa haaraan akka bahuu qabu isatti himan
Namootni hedduun Kitaaba Qulqulluu Jenevaa itti fayyadamuu isaanii kan argitan sababa kanaan dha,
Garuu yeroo isaan gara bataskaanaa deeman immoo Kitaaba Qulqulluu Phaaphaasootaatu jira.
Maxxxansaawwan lamatu jira ture.
Lamaan isaaniyyuu rakkuu qabu ture.
Kitaabni qulqulluu Jenevaa rakkoowwan muraasa qaba ture; kitaabni qulqulluu phaaphaasotaa rakkoowwan muraasa qaba ture;
Kanaafuu, isaan akkas jedhan, kaanee yeroo fudhannee isa sirreessina jedhan.
Isaan namoota beekumsa ol’aanaa qaban kanneen lafa kana irra jiran walitti fiduun
Nuti maxxansaa gadhee bakka buusuuf yaalii gocha jira miti jedhan.
Nuti asitti gaarii irraa gara baay’ee gaariitti irraa gara baay’ee baay’ee gaariitti deemuuf jenna. Kanan jechaa jiru isaan kun hiikaawwan gaarii dhha.
Kitaabni Qulqulluu Janavaa gaarii; Kitaabni qulqulluu phaaphaasootaa gaarii dha.
Nutii kitaabicha sirri gochuuf i akka gabbatu gochuuf deemaa jira.
Kanaafuu, bara hanga tti Maxxansaan King James beektoota yeroo sanatti baay’ee ol’aanaa ta’an tiin hiikame.
Fakkeenya tokko isiniif kennuuf, namni tokko,
Lancheeloot Andiriwuus, ogeessa Afaan Laatiin, Giriikii, Hibiraa’iisxii, Chaaldiyaa, Sooriyaakm Arabaa beekuufi inni dabalataan Afaanota hammayyaa kudha shan dubbata ture.
Inni namoota Kitaaba Qulqulluu King James waggoota torba hiikan keessaa tokko ture.
-Warri beektoota Arabaa turan jiru. Warri beektoota
Giriikiifi Ibraa’isxii tuan jiru. Warri beektoota Afaan Aramaa turan jiru. Isaan hundi isaanii namoota dandeettii ol’aanaa qaban turan.
Dandeettii isaan waa’ee kitaaba qulqulluu beekan ol’aanaa dha.
Isaan amantaa adda addaa muraasa ykn sirna amantaa adda addaa qabaachuu ni danda’u.
Hiiktoota kanneen biraa irraa amma tokko adda ta’uu ni danda’u.
Waanti isaan godhan, garee jahaatti walhiran.
Namootni jahaa kunneen Kitaaboota qulqulluu jahaan kana hiikan. Yeroo isaan kana godhhanitti, And when they
Hunda isaa waliin madaalan, gareewwan jahaa tokkoon tokkoon isaanii kana godhaniiru.
Achii booda gareewwan jahansaa hunda gamaagamuuf garee tokkoonn tokkoo isaa keessaa dursaa tokko filatan.
Waanti ta’ee, dubbisni kitaabichaa tokkoon tokkoon isaa yeroo kudha shan gamaagamamanii
hunda isaa xumuran: hundi isaanii adeemsa galma jechootaa isa sirrii kan isaan fayyadaman
irratti hunda’ee isa hiikame irratti waliigalan,
Inni waanta inni jedhu dha, inni kan inni jedhamu dha.
Garuu isa isaan yaadan wajjin xiqqoo wal ni faalleessa.
-Mootiin bara ture akkas jedhe, “Tole, ani koree hundeessuf jedha; yeroo hangamiyyuu fudhate,
Isin seeroota lama fayyadamuun ni hojjettu,” Jedhe: :
Kakuu moofaan Afaan Ibiraa’isxi irraa, Kakuu haaraan
Giriikii irraa hiikamuu qaba. Ani qabeenya hojichaaf barbaachiisu hunda bifa sabummaatiin nan kennaa,” jedhe.
Bara sanatti namootni Afaan Ibraa’isxii baay’ee baay’ee beeku,
Bara sanatti beekaan Giriikii ol’aanaan, Walitti qabamanii bara keessa namootni qacaraman.
Waggoota torbaaf kitaaba amma nuti seenaa dhala namaa keessatti hundaa ol faayidaa qabeessa ta’e hojjetan:
Kitaaba King James, jildii tokkoffaa, dhimma duraa ta’e baasan
Kitaabni kana hojjechuuf waggoota torba isaanitti fudhate.
Isaan hojii nama aja’ibu hojjtan. Kitaabni qulqulluu isiniifi ani har’a dubbsinu kan dhufe kitaaba bara foyya’ee bahe irraa dha,
Garuu kun labsituu kitaabichaa ture.
Kun bu’aa isaa dha. Bara keessa, inni Kitaaba qulqulluu kakuu haaraa King James kan
yeroo duraatiif harkatti qabatame jenne beeknu nuuf kenne.
-Kun waanta hubatame dha.
-Inni sun waanta hubatame dha.
-Kitaaba Kakuu haaraa kan harkatti qabatamu.
-Mootichi akkas jedhe, yoo bitachuu dandeessu ta’e bitatanii kan keessan godhachuu dandeessu. Manni kitaaba gurguru kan Loondoon keessa jiru tokkoon tokkoon isaa kitaabicha ni gurgura.
Kitaabichi dhumuu ni danda’a.
Seenaa dhala namaa keessati kitaabichi kitaaba hedduminaan gurgurame keessaa tokkoffaa dha.
Kitaabni Kitaaba qulqulluu gitee gurgurame hin jiru, ykn gara fuulduraattis hin jiraatu.
-Maxxansaawwan Kitaaba Qulqulluu kanneen gara Kitaaba Qulqulluu King James itti nu geessan yeroo ilaalu: Taayindaal,
Maatiyoos, Kovardaal, Kitaaba Qulqulluu Ol’aanaa (Isa Guddaa), Kitaaba Qulqulluu Phaaphaasootaa, Kitaaba Qulqulluu Jenevaa, hundi isaanii
Kitaaba Qulqulluu King James wajjin ni walsimu. Isaan hundi bu’uuruma irraa Kitaaba Qulqulluu King James wajjin waanta walfakkaatu qabu.
Kitaabni Qulqulluu Kinng James Kitaaboota qulqulluu kanneen isaan dura jiran walitti qabee kan cuunfedha.
Kitaabni qulqulluu King James kitaaboota qulqulluu afaan Ingilifaan barreefaman kan biraa isa baasuuf faayidaa irra oolan wajjin kan walsimu yoo ta'e,
Kitaabootni qulqulluu hammayyaa kunneen maaliif adda ta’anii?
Dr. James White namoota Kitaaba King James qofaa fayyadaman nama falme dha.
Inni namoota Kitaaba Qulqulluu King James qofa fayyadaman mormuun kitaaba barreesseera.
Inni ogeessa Kitaaba Qulqulluu King James qofaa hordofuun maaliif dogogora akka ta’e ibse godhamee fudhatama.
Nuti isatti kan dubbachuuf jennu yoo ta’u waa’ee falmii isaa hubachuuf jenna.
-Jeemsii? Nuti keessummoota qabna.
-Tole. Akkam jirtu?
Dr. James White, Guyyaa har’aa nu wajjin haasahuuf ykn dubbachuuf nuu heeyyamuu keessaniif baay’ee galatooma.
-Isin wajjin dubachuuf dhufuun koo na gammachiisa.
-Akkuma walitti qabaatti waa’ee “Codex Sinaiticus” ,
fi “Codex B” natti himtuu?
-Lamaanuu Saanaayitikaasii fi Vaatikaanaas sochhii jibbiinsa Kitaaba Qulqulluu King James qofaatti fayyadamuutiif dhimmoota ol’aanaa dha.
Sababni isaa Kitaaba Kakkuu Haaraa baasuu keessatti isaan kitaaba “Textus Receptus” irrayyuu gidduu galeessa turan.
-ootni Westcott fi Hort jedhaman barreefama ykn kitaaba baay’ee ol’aanaa ta’e
Caalaaatti sanadoota Saanaayitikaas ykn “Codex Aleph” fi Vaatikaanas ykn “Codex B” jedhamanii wamaman irratti hunda’uun baasan.
Sanadootni kunneen lamaan Westcott fi Hort dhaan kan caalaa dulloomaniifi turan
akkasumas kitaaboota Giriikii biraa kanneen “Textus Receptus” keessatti
hojii irra olan caalaa amanamummaa ni qabu jedhanii yaadu ture.
Kitaabootni qulqulluu ammayyaa bu’aawwan qorannoo arkiyooloojii hammayyaa fi beekumsa fi kalaqa hamayyaa jedhamanii yaadamu.
Jechuun koo, namootni Kitaaboota qulqulluu hammayyaa kunneen leellisaniifi beeksiisan akkas jechuun isinitti himu,
“Tole, maxxansitootni hammayyaa yeroo ammaa qabeenyoota hedduu isaaniif dhiyaate qabu.
Isaan sanadoota barreefaa kanneen Turjimaannootni King James hin qabne qabu.
Kanaafidha Kitaabootni qulqulluu hammayaa gaarii kan ta’an,”
Isiniin jedhu. Sababni isaan dhiyeessan sanadootni Kitaabootni qulqulluu hammayyaa irraa hiikaman kan
akka Maxxansa Idil Addunyaa Haaraa (NIV), kkf Mul’atawwan haaraa dha.
Jechuun isaan kun jaarraawwan hedduuf owaalamanii ture. Amma mee waan isin gaafadha.
Isin Kitaabni qulqulluun inni dhugaan jaarrota hedduuf owaalamee ture jettanii amantuu?
-Ani kanan jedhu, Waaqayyoo uummatni isaa waggoota dhibba hedduudhaaf
Kitaaba Qulqulluu dogongoraa akka fayyadamaniifi akkuma tasaa ammo
bara wwan keessa sanadoota sirrii akka nuti argannu ni taasiisa jettanii ni yaaddu?
Kun hiika hin kennu ykn kan fakkaatu miti.
Kanan jedhu, Waaqayyoo dhaloota hundaaf Dubbii ykn Jecha isaa kan eegu ta’uu waadaa galeera.
Garuu isaan bu’uuruma irraa Jechii Waaqa inni dhugaan bakka tokko owaalamee,
jaarraawwan amma kanaatiif namni tokkoon tokkoon isaa waanta dogongora ta’e labsaa fi amanaa ture,
achii booda galanni Waaqaa haa ta’uuti qorannoo sirna lafee ykn arkiyooloojii kan baroota sanadoota haaraa kunneen
kan Jechi Waaqayyoo inni sirriin bakka owaalamee turee qotamee baheera jedhaii amanu.
Ilaali, Waaqayyo karaa ayyaana isaa fi namoota Waaqayyoo eebbise kana
Hafuura Qulqulluutiin waggoota dhibbatamaa fi kumaatamaatiif deeman hundaatiin
Jecha Waaqayyoo gara keenyatti fiduuf yeroo hedduu fudhatee tattaaffii ol’aanaa otuu godheera ta’ee,
sanaa booda jechichi akka owaalamu ni heyyama turee?
Lakki, Isaan kun kan booda irra qotamanii bahan, sanadootni haaraaniifi baayeessa jedhaman kunneen kan waliin dhahamanidha.
Isaan maqaa kan akka “ Codex Vaticanus” jedhu qabu. Amma, hmm, kun amma sammuu namaatti
ergaa akkamii dabarsa? yoo "Codex Vaticanus" jedhamu.
-Sababni isaas inni Vaatikaan keessatti waan argamuu ykn kan Vaatikaan wajjin walitti dhufeenya qabu waan ta’eef,
Akka kootti dafee nama shakkisiisa.
-Kakuu Haaraa keessaa hiikoota fi kutaalee Giriikii , caalan qo’annoof dhiyaataniiru.
caalan qo’annoof dhiyaataniiru.
-Kannneen keessaa kitaaboota turjumaannootaan kanneen
Kitaaba Qulqulluu King James ala ta’an hiikuuf ol’aantummaan faayidaa irra oolan dha.
Sun sanadoota barreefamaa jiran keessaa % dha,
Kitaabni Qulqulluu King James sanadoota barreefamaa , keessaa %. hiikaaf fayyadameera.
Kanaaf dha Kitaabichi barreefamoota harka caalaa jedhamee irra caalaa kan waamamu. Isin dabalataan kan hubachuu qabdan -
Waanti kun yeroo mara wangeeloota mataa isaanii keessatti Sinaayitikaas fi Vaatikaanasii gidduutti hin caqasamne jedheen yaada,
Adda addummaawwan , ol ni jiru.
Kanaafuu, yoo madawwan kan biraa isaan fayyyadamaniin yoo mirkaneefamu ta’e irraa kan hafe
isa kamitu adda addummaa sirrii ta’uu ykn dubbisa isa sirrii kam akka fayyadmuu qabni akkamiin beeknaa?
Gariuu isain sanada durii lama A fi B jedhamanii waamaman kannneen iddoo ,tti Wanageela keessatti kan walmorman ykn walfalaman yoo qabaatan, asakamtu amanama akka ta’e akkamitti beektu?
Isa kamtu amanama akka ta’e akkamitti beektu? Ani illee So I'd
Sanadoota barreefamaa irra caalaatti Kitaaba Qulqulluu
“the Textus Receptus” nuuf kennana amana.
-Nuti waanta owaalame yoo argineefi kan nuti fudhanne irraa adda waan ta’e kan dubbatu yoo ta’e
Barrefamni fudatame, “Textus Receptus”, kan isin beektan, Jaarroota hedduuf kan namootni itti fayyadaman irraa adda dubbate,
Sun waanta waliin dhahame ta’uu qaba.
Gooftaan isa hin eegu tanaan Jecha Waaqayyoo ta’uu hin qabu. Isaan bu’uuruma irraa
Kitaaboota qulqulluu kumaatama kanneen Afaanoota adda addaatiin waanta walfakaatu jedhan fudhatama dhabsiisu.
Kana irra isaan barreefamootni kunneen kan bubbulan wanta jedhamanii kan amanaman waan ta’eef Kitaaboota “ Codex Vaticanus”, “Codex
Sinaiticus” wajjin deemu ykn ni fudhatu. Tole, barreefamootni kunneen turaniiru ykn umurii dheeraa lakkoofsiisaniiru jechuun
Isaan sirrii dha jechuu miti. Isaan kan waliindhahumsaa ykn kan sobadha miti jechuu miti.
Ilaala, phaawuloos akkas jechuun Ergaa gara Qoronxoos ffaa boqqonnaa ffaa irratti nutii hime, Namootni
Bara dhufaatii isaattilee Jecha Waaqayyoo jallisan jiru. Ergaa gara Namoota Tessalanoosiqee ffaa keessatti, isaan kan
Ergamaa Phaawuloos biraa eegaman fakkaatanii kitaaboota sobaa barreessaa turan jedha.
Mul’ata boqqonnaa keessatti, Waaqayyo namoota jedha isaa keessa hir’isan ykn jecha isaatti dabalan akeekkachiisuuf yaala tureera.
Kanaafuu, sanatu amma uumama jira. Kanaaf,
Isin dhaloota Kiristoos booda waggoota irratti kitaaba barreefame waan argataniif,
Haalatti inni jijjiiramu ykn haleelamu hin jiru, sirrii miti? Garuu jiraachuu ni danda’a.
Akka kitaabni qulqulluun nutti himutti, warri Jecha Waaqayyoo irratti daba oolan hedduutu jira.
Xinnoo miti, baay’ee dha.
-Barreefamootni sanadaa kunneen qofaa isaanii hin dhaabbatan.
-Har’a Nestle Aleen Jildii ffaa, UBS kan yeroo ffaatiif sirreefame, bakka hedduu
Kan itti Sinaayitikaas kan Vaatikaanas irraa addatti bahu ykn walsimmuu dhabu kan jiran ta’uu qofaa otuu hin taane,
Kitaabbotni kunneen yeroo mara waliin kan jiran ta’ulee, bu’uura Papryi tiin isaan qofaa hin dhaabbatan.
Kitaaba Westcott fi Hort Aleph fi B gartookko keessatti loogii walhin gitne calaqqiseera.
Garuu kitaabootni kunneen Paapparees dura hojjechaa turan.
Har’a har’a waanti Paapparees dura jiru kamiyyuu bu’uurumaa fudhatama hin qabu.
-Sababa sanadootni barreefamaa haaraa Mul’ataniif inni kan durii fi fudhatama kan ta’aa?
-Argamni the Paapparees, kan biyya Misiraa irraa argame
Fi bakkawwan adda adda rraa dhufe kun...
-Aleeksaandeeriyaan Magaala Misira keessa jiru. Misirri Kitaaba Qulqulluu keessatti uummata bifa waaqayyo wajjin walitti hin araaramneen ykn bifa cubbuutiin ykn dogongoraan maqaan dhahamu dha.
Fakkeenyaaf, Mul’ata :, keessatti macaafni qulqulluun akkas jedha,
"Reeffi isaanii waltajjii ykn addabbabayii magaala guddoo sanii irra ni ciisa;
Isheenis fakkeenya afuuraan Sedoomiifi Misira kan jedhamte immoo
kan Gooftaan keenya itti fannisame dha." Kanaafuu, Waaqayyo Kitaaba qulqulluu keesssatti bakka hamaa,
kan seera waaqaayyoo hin eegnee fi Seexana bakka bu’uu ibsuuf fayyadamuu yoo barbaade
Inni Misiraan sana bakka buusa. Misirri Kitaaba qullqulluu keessatti mallattoo hammeenyaa fi
Seera waaqaa cabsuudha.
-Dubbisootni Sanadoota bareefamaa kanneen duraa, F, F, F
Aadaan barreefamaa Sinaayitikaas fi
Vaatikaanas keessa jiran kan isaanii qofaa akka hin taane mirkaneessanii agarsiisu. Yeroo ammaa oduuwwan odeefan jiru.
Isaan fakkessitoots Roomaan Kaatoolikiifi
Kan isaan fakkaatan malnadhibdee akkanaa agarsiisaniiru jedhu.
-Maxxansaan Kitaabaa Qulqulluu Idil Addunyaa inni Haaraan (NIV) kitaaba qulqulluu Kaatoolikiidha jettanii yaaduu dhiisuu dandeessu. Isaanis akkas jedhanii sinitti himu,
"Ooh, inni kan Ivaanjeelistootaadha, kan Baaptistootaa dha.” jedhanii isinitti himu. Garuu isin waanta ta’e ni beektu?
Ani amnataa Kaatoolikii kan sanadoota barreefamaa Kaatoolikii kunneen irratti hunda’e isinitti agarsiisuuf jedha.
Hojiiwwan Hawaariyootaa : maxxansaawwan kitaaba qulqulluu hammayyaa irraa baafameera.
Sababni isaas inni daa’imummaatti cuubamuu ni dhorka.
-Nuti sababa kanaan cuphaa ijoollummaatti hin gageessinu. Maaliif akka ta’e beektu? Sababni isaa akkaataa Kitaaba Qulqulluutiin
Naatiin eenyutu cuuphamuu irraa na dhorka? Isin amanuu qabdu,
Isaa booda ni cuphatu. Daa’imni amanuu hin danda’u. Cuuphaan daa’ima hin ajajamnelle.
Mucaa xiqqaan yoo du’e lubbuun isaa gara jannataa deema. Garuu Kaatoolikiin sana dubbisuu hin danda’an; akkas jedhu,
"Tole, cuuphaa daa’immanii itti haa fufu jedhu. Anaan eenyutu cuphamuu irraa na dhorka? "
"Homtuu. Isaa haa cuubnu." Lakki, Waanti tokko akka isin hin cuubamne isin ni godha.
Innis itti amanu dha. Inni garuu Kitaaba Qulqulluu keessan keessa hin jiru.
-Kaatoolikootni Maaramiin bara jireenya ishee guutuu Dubaroo dha amantaa jedhu barsiisu.
Amma nuti Isheen yeroo Yesuus Kiristoosiin deesse Dubaroo ta’uu ishee ni beekna,
garuu sanaa booda isheen ijoollee bira kan deessee qabdu ta’uu ifatti ni kaaha.
Dhugumatti, kitaabni qulqulluu Yesuus obboleewwan gartokkoo afur akka qabu tarreessa: Jeemsi, Josees,
Yudaas fi Simi’oon dha. Inni maqaa obboloota isaa nutti himee, isaa booda akkas jedha
“Obboleettiiwwan isaa, isaan nu wajjin hin tureeyii? " Kanaaf Yessuus yoo xiqqaate obboleewwan gartokkoo torba qaba,
Sana oliyyuu ta’uu ni danda’u. Kanaaf mirkaneessi ol’aanaan Wangeela Maatiyoos : keessa jira." Achii booda
Yooseef hirribaa dammaqee, akkuma ergamaan goftaa isa abboometti kaadhima isaa of biratti in fudhate:
Haa ta’u iyyuu malee, inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre;
Mucicha immoo, “Yesuus” jedhe in moggaase. " Inni gonkumaa ishee hin beeku hin jenne.
inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre jedha.
Maxxassa Idil Addunyaa isaa haaraa lakkoosa irratti akkas jedha, "Garuu hamma isheen mucaa deessutti ga’eela ishee wajjin hin raawwan ture.
Inni mucichaaf maqaa “Yesuus” jedhu moggaase. "
Maaltu keessa hafe ? "mucaa angafaa".
Yesuus mucaa ilamaa hangafaa kan Maariyaamii ta’e, mucaan lamaffaa jiraachuu nutti hima.
Garuu Maxxansaan idil addunyaa inni haaraan (NIV) kana keessa baasee akka isin Yesuus mucaa ishee isa qofaa akka ta’etti akka beektan isin godha.
Amantaa Bataskaanni Kaatoolikii qabdu kan biraan kan maxxansaan idil addunyaa inni haaraan deegaru waa’ee of reebuu dha.
Eeyyeen, isin sirriitti na dhageessaniittu.
Of reebuu ykn of rukkuchuu.
Yeroo ammaa Hiriyootni keessan kan Amantaa Kaatoolikii hordofan kan Yuunaayitid Isiteetis keessa jiran of hin reeban ykn hin rukkutan.
Garuu seenaa keessatti Bataskaanni Kaatoolikii Roomaa
Gocha of reebuu ykn rukuchuu ni barsiisu, ni jajjabeessu, sirrii miti? Dhugumatti, yeroo
Heeneerii ffaan amantaa Kaatoolikii seeraan ala godheefi Bataskaana Kaatoolikii Roomaa Ingiliizii keessaa baaseetti,
Inni yeruma kanatti seera of reekuchuu ykn reebuu dhorku dabarsee ture.
Har’allee Filippinisii keessatti, Hordooftootni kaatoolikii of kennan bara keessatti of reeban ykn of rukutan.
Filippinsii keessatti isaan of fannisu;
Of reebu ykn of rukutu. they beat themselves; Hanga jilbi isaanii dhiigutti jilbaa isaaniittiin ni daa’imu.
Isaan gocha akkasii of irraan gahu jechaan jira. Waanta Kitaabni qulqulluun Ergaa Uummata Qoronxoos ffaa lakkoofs : irratti jedhu ilaala.
"Garuu ani erga warra kaaniif lallabee booda kan of gate akka hin taane,
foon koo haleelee of abboomuun naaf in ta’a.”
Maxxansaan Idil addunyaa inni haaraan (NIV) akkas jedha, "Ani qaama koo nan gossoma.” Maxxansaawwan hammayaa hedduun kan deegaruun akkas jedhu,
"Ani qaama koo nan gossoma…..”
-Lakki, isaan “tasgabaahi” hin jedhan. Isaan “Nan rukuta” jedhu.
-Lakki, inni waanna NET’n jedhu dha.
-Ooh, Tole. Garuu kan ani isinitti himu Maxxansaan Idil Addunyaa inni Haaraan (NIV) “Ani qaama kooo nan gossoma jedha.” Maxxansaan Idil Addunyaa inni Haaraan (NIV) kan bara akkas jedha,
“Ani qaama koo gussumaadhaan nan dhaha jedha. "
"Ani qaama koo nan rukkuta".
-Ani Maxxansaa Idil Addunyaa isa Haaraa (NIV) irra goruuf kanan qajeele isinitti hin fakkaatiin.
-Tole. Inni bara keessa Ameerikaatti hiikaa baay’ee gurgurame dha.
-Ani sana nan shakka.
-Ani kana maddoota hedduu irraa ilaaleera. -Ani waa’ee ESV yaada...
-Inni lakkoofsa dha.
-Tole, isin itti maknaan nuti ni goona...
-ESV’n lakkoofsa ffaa dha. Ani dhimma kana irratti qo’annoo hedduun gaggeesse.
-Isin qabeenyoota baay’ee yoo itti dabaltan, ta’uu ni danda’a.
-Kanaafuu, Ergaa gara Qoronxoos ffaa lakk. :tiin, Isin kan Maxxansaan Idil Addunyaa inni Haaraan (NIV) “of rukuchuu jedhe” hin hordoftan jechuu dha. "?
-Sababni isaa inni kan Kaatoolikiidha. Bataskaan Kaatoolikii jechuu koodha, nagaan bula!
-Ooh, Lakki… inni bakka inni irraa dhufe miti.
-Hafachu sekoondii tokko. Isin akkas jechuuf deemtu,
Hordoftootni amantaa Kaatoolikii hanga har’aatti of hin rukutanii?
Isin of hin reebanii? Isin akkas jechuufi dha, Heneerii ffaan….
-Namootni muraasni ni godhu. Irra caalaan isaanii bakka namootni hedduun walitti qabamanitti hin mul’atan.
Isaan ofi hin garafan.
-Seenaa keessatti akkami dha? Ingilizii keessatti yeroo Henerii ffaan hordoftoota amantaa Kaatoolikii baasee fi
baruma kana of reebuu seeraan ala jedhee labse akkam ture?
-Garuu Isteeveen, inni turjumaanoota maxxansaa Idil Addunyaa isa haaraatiif maal godha?
Argitanii, Roomaan duratti sana waan gooteef
Kan isaan yaadan kanadha jechuu miti.
-Kan ani jechaa jiru Seexanni Seexana dha, Tole? Seexanni yeroo baroota gidduu galeessaatti namoota of rukutan argate
Seexana akka isin of rukkutaniif maxxansa idil addunyaa isa haaraa (NIV) keessa barreessee kahe wajjin tokko dha.
Inni bakkatti ani walitti isaan fidudha.
-Akkuma beektan, maxxansa idil addunyaa isa haaraa (NIV) keesatt, waanta inni odeessu ifa dha;
inni ifatti meetaafoorii ykn walbira qabuun walfakkeessuuudha.
-Tole, Maxxansa Guddaa fi Bayeessa dha. Ani waa’ee keessan hin beeku, garuu maxxansaan guddaan anatti yeroo hunda ni cima.
Ani gonkumma isa hin hubadhu. Garuu, waan hundaafuu, Maxxansa isa guddaa dhaggeefadhu:
"Garuu [akka nama booksii dorgomuu] ani qaama koo nan gosoma.” Amma mee waan kana nan isin gaafhadha:
Nama booksii taphatu kan of rukutu agartanii beektu? Sababni isaa ani argee hin beeku.
Kitaabni Qulqulluu kan Ingilifa beekamaatiin barreefame kana isin salphaatti akka hubatan isin taasiseera, sababni isaa
Inni sababa isin maxansawwan haaraa kunneen itti jaalatan miti, sababni isaa hubachuuf salphaa waan ta’eef miti?”
Kanarra ani qaama koo irra bookiiwwan buusee akka garbaa to’annoo koo jala isa ni oolcha.”
Ilaala, of rukuchuun ykn reebuun jecha kitaaba qulqulluu miti. Isin akkas jettu, tole,
Inni bifa icciitiitiin jedhe.
Tole, Namootni qabatamaan of rukutan maal ta’uree?
Hiriyyaa koo, kun amantaa keessummaafi hin beekamne dha. Ani itti hin amanu.
Kitaabni qulqulluun Maatiyoos : keessatti akkas jedha, "Namootni cubbamaafi amantaa hin qabne baay’ina dubbataniin akka dhagahamaniif,
isin yeroo kadhatan akka isaanii toluma hin daddabaliina."
Kanaafuu waanta tokko yeroo tokko dubbachuu caalaa yoo irra deddebinee jenne
waaqayyo kan nu dhagahu seenee
akka malee waantoota akka irra hin deddebine barnootni kitaaba qulqulluuin nu barsiisa.
Irra deddebi’uu jeechuun maal dha? Jecha tokko yeroo lama ykn sadii yk shan jechuu dha.
Ilaala, Inni kan jedhu, akka namoota amantaa hin qabnee toluma irra deddebatiina. Tole,
Maxxansaan Idil Addunyaa inni haaraan gama biraatiin fi maxxansaawwan hammayyaa hundi kana baay’ee jijjiraniiru-
"Yoo kadhatan akka namoota amantaa hin qabnee toluma waan gatii hin qabneef waantuma tokko irra hin deddebi’ina.
Isaan yoo baay’ee dubbatan kan dhagahaman jedhanii yaadu. "
"Irra deddebi’uu" waanta hiika qabeessa hin taane tokko yeroo irra deddbitanii kadhatan jechuu dha.
Inni toluma irra ddebi’uu wajjin tokko miti.
Ani nama Roomaan Kaatoolikii hordofuu “Isin maaliif Kadhannaa “Yaa abbaa keenyaa” jedhu ammas ammaas maaliif daddabaltu.
Isin baay’ee waan dubbataniif hin dhagahamtan.
Inni toluma irra deddebi’uudha. Yeruma tokko jechuu fi gochuu qabdu
Waanta tokko ammas ammas irra hin deddeebi’ina.”
Akkuma beektan, inni Maatewoos : tiin deegarama. Garuu otuu ani isaanittti akkas jedhe,
"Heey, akka nama amantaa hin qabnee waanta tokko irra deddebitanii jedhuu dhaaba,” isaani immoo akkas naan jedhu, “Tole
Inni kun irra deddebi’uu miti." Isaan akkas jechuu danda’u, "Kadhannaan Gooftaa Jecha Waaqayyoodha.”
Sababni isaa inni Jecha Waaqayyoo, sirrii dha miti? Garuu ani haala bu’aa hin qabneen Waaqayyootti irra deddebi’ee himuu hin qabu,
Garuu Bataskaanni Kaatoolikii waantoota tokko bu’aa tokko malee irra dedebi’anii jechuu barsiisti,
Jijjiiramni akka dhufuuf
Kana qofaa otuu hin taane, hordoftootni amantaa Kaatoolikii amantaa baay’ee cimaa cubbuuwwan isaanii lubatti himuu ni qabu.
Isaan gara Yaa’iqoob : tti isin geessu; Kitaaba Qulqulluu Kaatoolikii keessatti
Koleenii keessatti yaadannoon jechi lakkoosa kanaa akka isin cubbuu keessan luba fuulduratti dhugaa baatan isinitti hima yaadannoon jira.
Fakkeenyaaf Kitaaba Qulqulluu Kaatoolik “Doway Rheimes” keessaa yaadannoo keessatti akkas jedha.
Innis waanuma Yaa’iqoob jedhu dha, Yaa’iqoob :;
“Waliin waliin keessanitti cubbuu keessan himadha. Akka fayyitaniifis inni tokko isa biraatiif haa kadhatu.
Kadhannaan nama qulqulluu hojii isheetiin humna ni godhatti.” Amma kan maxxansaan Idil Addunyaa inni haaraa (NIV) fi mannassaawwan hammayyaa kan itti jijjiiran dhaggeefadha:
"Kanaafuu, cubbuu keessan waliif walitti hima;
akka fayyuu dandeessaniifis tokko isa tokkoof kadhadha.
Kadhannaan nama sirrii humna kan qabduufi bu’aa qabeessa dha.” Kun kan NIV dha.
Amma isin akkas jettu, “Tole, innoo tokkuma.” Garuu inni tokko miti.
Duraan dursee gara afaan isa muummeetti deebitanii otuu deemtan,
Afaan Giriikiitiin kan inni sirritti jedhu, “balleessadha” malee “Cubbuu” miti.
-Kitaaba “Textus Receptus” keessatti, jecha balleessaa jedhuuf "paraptómata" jecha jedhu fayyadama, jechi kun immoo
jecha "paráptoma," jedhu irraa dhufe. Kana jechuun immoo “Balleessa” jechuu dha. Yeroo tokko tokko namootni And I think sometimes people,
Waanta dogongoraa yooo dubbisan, yeroo isaanii cubbuu isaanii Waqayyootti himachuu irra namatti himuutiin yoo qaban kan mul’atan natti fakkaata,
Sababni isaas, "yoo cubbuuwwan keenya amanne, inni cubbu keenya nuuf dhiifachuuf amanamaa waan ta’eef,
cubbuu keenya nuuf dhiisee cubbuu nuti dalagne hunda irraa nu qulqulleessa,”
Akkasumas ani balleessaa koo kan isinitti himu yoon akkasi jedhe dha, “Ani jireenya koo keessatti gama kanaan dadhabaa dha.
Ani cimuutu narraa eegama. Maaloo naaf kadhattaa?”
Yeroon dogongora ykn balleessaa koo isinitti himu, ani gara gaabbitti deemaa hin jiru,
Yeroon cubbuu koo isinitti himu, garuu ani waa’ee balleesssaawwaniifi dadhabbina koo kan dhuunfaan qabu himaan jira.
Kanaafuu jechoota “Cubbuu” fi “balleessaa ykn dogongora” jedhan hubachuu irra adda adduma ni jira.
-Kiristinnaan Ivaanjeelikaa seenaa keessatti Amantaa Kaatoolikii akka kiristaana dhugaatti hin fudhanne.
Yeroo ani daa’imma ture, dunkaanni kitaaba Kiristaanaa.
kitaaboota fi barreefamoota Bataskaana Kaatoolikii saaxilaniifi isiniin waa’ee Bataskaana Kaatoolikii isin akeekkachiisan ni turan
Yeroo ammaa yoo mana kitaabaa Kiristaan yoo deemtan,
Callee fannoon itti rarra’u qabu; Kitaaboota qulqulluu Kaatoolikii gurguru; meeshaalee Kaatoolikii gurguru.
Kan nuti argaa jiru Kiristinnaa Ivaanjeelikaalii fi Kaatoolikii Roomaa gidduu sarara badduu hin mul’anneefi waliin dhahamaa akka jiru dha.
Namootni amantaa addunyaa tokko
Kan Kaatoolikii, duudhaawwan kiristinnaa fi
amantaawwan adddunyaa irra jiran hunda tokko godhu fudhachuuf qopha’a jiru.
-Namootni dhaabbbata amantaa addunyaa, amantiiwwan hundi,
Lafa irratti adda adda ta’anille, tokkoon tokkoo isaanii karaa sirrii isa gara Waaqayyootti nama geessanidha jedhanii amanu.
-Waaqoota adda addaa kunneen hunda irra Waaqayyo tokkichi
kan namoota adda addaatti karaawwan adda addaa of mul’isu ni jira.
Akkuma beektan, maanni waan akkanaa, huuh?
-Nuti hundi Waaqa tokko waaqeefannaa, Kiristaanniifi Muusiliimmnis?
-Eeyyeen Waaqa tokko waaqeefanna jedheen yaada. Nuti Waaqayyo isa hundumaa danda’u bira gahuuf daandiiwwan adda addaa qabna.
-Akka yaada keessaniitti, Kirisitaanootniifi namootni Kiristaana hin taane, namoootni Muusilima ta’an Jannata galuu?
-Eeyyee, ni galu. Nuti achi galuuf daandii adda addaa ni qabna.
-namootni Kiristoos jaalatan, ykn Kiristoosiin beekan,
isaan waa’ee isaa beekanis beekuu baatanis, isaan miseensoota qaama mootumaadha; Kunis waanta Waaqayyo har’a hojjechaa jiru dha:
Inni namoota addunyaa gara maqaa isaatti waama jira,
Isaan addunyaa Muusilimaa ykn addunyaa Buddisitii ykn addunyaa kiristaanaa ykn addunyaa namoota amantaa hin qabnee irraa dhufaniis,
Isaan miseensoota qaama Kiristoos dha. Sababni isaas,
Isaan Waaqayyoon waan waamamaniif dha. Isaan maqaa Yessuus beeku dhiisuuyyuu ni danda’u, garuu isaan
Onnee isaanii keessatti waanta isaan hin qabne akka barbaadan ni beeku, isaan
Gara ifa qaban qofaatti garagalu.
Isaanis fayyineera jedhanii yaadu natti fakkaata.
Isaan nu wajjin Jannata seenna jedhanii yaadu.
-Hanga du’uti, obboleessotaafi obboolleettiiwwan koo kan Kiristoositti amananiif kan aamu jalaala irra kan hafe kan biraan hin jiru:
obboleessotaafi obboolleettiiwwan koo kanneen amantaa Kaatoolikii, amantaa pirooteestaantii hordofaniifi kanneen “Christian Reformers” fi Lutaraan hordofan.
Ani maqaa amantaa kamiin wamaamtan nan hin dhibu.
-Jaak akkauma beektan, lubootni Pirooteestaantii kanneen biraa hedduun
kan isin wajjin waanta walfakkaatu hojjettan ni jiru. -Eeyyee.
-Isin Amantaan Vaatikaan isinitti ni tolaa?
-Ooh,Ani Amantaan Vaatikaan baay’ee baay’ee natti tola. Ani phaaphaasii wajjin walarguuf yeroo hedduun yaale.
Isaan Kiristoositti ni amanu.Kiristoos Fannoo irratti fannisamee du’uu isaa fi du’a moo’ee ka’uu isaa ni amanu.
Kun bataskaanoota hunda biratti amanama jedheen yaada.
Bataskaana Anjeelikaanii ykn Baaptistii ykn Bireezreen Assembiliitti kkn
Bataskaana Kaatooliikii Roomaattis waantuma walfakkatutu natti dhagahama.
-Maal akka ta’e beektu, nuti ilaalchota walfakkaatan hin qabnu. Ani amantaa Mormoonizimii nan hubadha. Inni Kirisitinnaa duraan ture miti.
Garuu, ani feetu xiqqo nan bal’isa fi caalaatti ifa dha.
Namni tokko yoo Yesuusiin Jaalate fi amane
Isaan ijoollee Waaqayyoodha, Inni anaaf gaarii dha.
-Roobeert MaakGinees fi Kaawunsilii Qorannoo Maatii wajjin ta’uun akkas jedha,
Ajandaan okataan namoota ykn uummata dhaabbata amantaa tokko jalatti gamteessuun akka isaan they will
Galmawwan Mootummoota Gamtoomanii kan akka to’annoo baay’ina uummataa, mirga ulfa baasiisuu,
fi mootummaa addunyaa tokko karaa nagaatiin akka fudhatan gochuu dha.
-Hundi isaanii tokko ta’anii aangoo Seexanaa jalatti dhufaa jiru.
-Namootni ajaja addunyaa isa haaraa akkasumas amanii sobaa akka fudhataniif,
Jijjiramoota suuta suuta gochuu akka qabu Seexanni ni beeka.
Qajeelchituu jeequu ni beeka. Seexanni ijaarsawwan bu’uuraa amantaa keenyaa suuta kukkuta.
Seexanni ijaarsa bu’uuraa Jecha ykn Dubbii Waaqayyoo suuta kukkuta.
Innin amantaa Kiristinnaa kan Kitaaba Qulqulluu isa dhugaa irratti hunda’e suuta suuta cicciree,
amantaa addunyaa haaraa bakkatti kan Kiristoosiin mormu
akka Goofataa Yessuus Kiristositti waaqeefatamuun bakka buusuu akka danda’uuf suuta hojjeta.
-Isin maxxansaawwan Kitaaba qulqulluu hammayyaa
Ajaja Addunyaa haaraa keessatti shoora akka taphatan ni amantu?
-Tole, Ani baay’ee baay’ee ta’uu danda’a jedheen yaada, sababni isaas turjumaanoonno kana caalaa baaya’atan akkuma bahaniin,
caalaatti akka bilisa ta’anitti caalaatti uummata bal’aa biratti fudhatama argatu.
Garuu ammaan tana olitu jira. +.
Hojiiwwan hiikaa kana keessatti namoota hiikaa jechootaa itti facaasanitu jiru kan akka namoota dujjee (dhiiraa fi dhiira) akkasumas dubaaraaf dubara walqunnamtii saalaa raawwatanii
Namoota jechoota kan hiikaa akkanatti facaasan ni jiru,
Jecha “isa” ykn “ishee” jedhu keessaa baasanii “waantichi” godhu,
Hiikawwan hammayyaa fi kanneen amma caalaatti bilisa ta’anii bahan keessatti
Amantaawwan uummata gosa adda addaa hunda walitti akka dhufan ni heeyyamu
Akka isaan waanta tokkoon akka hin mufanne ni godhu.
Amalli isaa akka tokkummaa addunyaa dha. -Sirriidha.
-Kanaafuu, xumura irratti tokko gochuun qaamaa fi kutaa isaa dha.
-Kitaabni qulqulluu King James jecha “Jahaanama” jedhu yeroo itti fayyadamera.
Kan ani jedhu, yeroo isin Kakuu Moofaa kan NIV keessa jiru yeroo dubbistan, iddootti jechi “Jahaanama” jedhu iddoo tokkotti caqasame hin jiru.
Isin jecha “jahaanama” jedhu hanga boqonnaa Maatiyoos bira geessanitti NIV keessatti hin dubbistan.
Ammaa mee haa jennuuti, maxxansaawwan haaraan kunnneen akka salphaatti hubachuun danda’amu godhamanii barreefamaniiru.
Ammas, nama karaarra deemu tokko Jaahanamni maal jennee otuu gaafatne,
Isaan jaahanamni bakka gubannaafi roorroo f hiphinaa akka ta’e nutti himu.
Bakkichi bakka namootni erga du’anii booda bakkatti adabamaniifi dararaman dha.
Otuu “Si’ool” maalii jennee isaan gaafanne,
namootni hedduun hin beekan.
Jechi “si’ool” jedhu maalidha?
-Owaalcha? owaalchii jechuun haguugduu waa nama irraa ittisu jechuu dha.
-Irra deebi’a jedha. -Si’ool.
-Maal? Qubee isaa waamaa.
- S-i-‘O-O...Ani waa’ee kanaa dhugumatti dubachuu hin danda’u. Lakki.
-Lakki ani hin beeku.
-Ani hin beeku.
- S moo maal? - S-I’-O-O-L: Si’ool.
-Lakki. Ooh, si’ool? Lakki.
-Waanta mataa koo ol jiru yaadachuu hin dandeenye.
- S-I’-O-O-L? Ani mirkaneessuu hin danda’u. Ani jechicha gonkumaa hin argane.
-Lakki, Ani isabaay’ee hin beeku.
-Tole, eeyyee. Namootni hedduun jechicha hin beekan.
Jechootni kunneen jecha “Jahaannama” caalaa salphatu isinitti fakkaata?
Ani Kitaabni Qulqulluu King James Jecha ykn Dubbii Waaqayyoo dha jedheen amana. Ani kitaabichi dogongora hin qabu jedheen amana.
Maxxansaawwan kanneen biraa bahan –kan isin beektan, NIV,
Kitaaba Qululluu “the New American Standard” – isaan gaarii miti,
isaan kan seexanaadha jedheen amana. Kitaaba keessan keessatti,
jijjiiramoota kunneen taasifaman duuba waanti gocha seexanaa ta’e tokkoyyuu kan hin argine fakkaata.
Seexanni jecha isaa ni jijjiira ykn jijjiramootni kunneen gocha seexanaa miti jettanii yaaddu.
Jijjiiramni barreefamaa kun namicha akkas jedhu wajjin hariiroo qaba jettanii hin amantanii,
"Ani kana kanaan jijjiruuf ka’e seexana waan ta’eef dha,
Sababni isaas ani Jecha ykn Dubbii Waaqayyoo jijjiiruun barbaada."
-Ani Waaqayyo jecha isaa akka eegu sirritti itti amana.
-Garuu isin fakkeenyaaf jecha "Conspiracy theorist" jedhu kitaaba keessan keessatti yeroo digdama fayyadamuu keessan hin amantan.
Jecha Waaqayyoo jijjiiruuf ammeenyi yaadame hin jiru jettanii amantu?
-Lakki, hiikaawaan Kitaaba Qulqulluu hundi Jecha Waaqayyoo jijjiiruuf uummaman natti fakkaata.
Garuu isaan ifa dha; isaan akka salphaati hubatamu.
-Garuu namoootni har’a Kitaaba
“New World Translation” kan ifatti Jecha Waaqayyoo dabse baasan har’a yoo jiraatan isaan kanaan
duras ni jiru turee- irratti waliigaltuu?
-Tole. Kanaafuu, yoo namootni Kitaaba “New World Translation” keessatti har’a Jecha Waaqayyoo kan dabsaniifi kan jijjiiran yoo ta’e fakkeenyaaf,
Isaanoo bara Phaawuloosis Jecha Waaqayyoo dabsaa fi jijjiiraa turann – inni waa’ee kanaa akeekkachiisaa ture-
Namootni Jecha Waaqayyoo
jaarraa sadaffaa, afuraffaa, saddeetaffaa, sagalaffaa keessa akka jallisaa turan maaliif hin amantan?
-Kitaabni “New World Translation” jalisa fi jijjiirraa Jecha Waaqayyoo dha. Kana addaan baasuun salphaadha.
Sababa ani "conspiracy theory" fayyadameef isin waantoota kunneen bakkatti deebisuuf ragaa qabaachuu qabdu,
"Tole, anatti akkas natti fakkaata.”
Akkuma beektan, Bakkatti “New World Translation” dogongoraan hike meeshaalee dha,
Maacaawni Qulqulluu “Watchtower” fi “Tract Sociery”
dhimma Kiristaanummaa Kitaaba qulqulluu irratti akka waldhaban kan godhe dha.
-Isin Kitaaba “New World Translation" Yaa’iqoob : hin dubbisne ta’a.
-Sababni isaa Yaa’iqoob :, inni Kitaabba qulqulluu King James keessa akkas jedha, the King James Bible it says, "Waanti hinn miidhoofne
Soogidaan nyaatamaa? Ykn immoo bishaan hanqaaquu ykn buphaa ni midhawaa?"
Kitaabni “New World Translation” akkas jedha,"Juusiin Marshmaal
loo ni miidhaawa?”
Waanti isaan jijjiiran “Watchtower”tiif waan godhu ni qabaata! Tole?
Kanaafuu, kan ani jedhu sana dha…
-Isin sana yaadatanii?
Suni jiraanan... Eeyyeen ani nan yaadadha.
Ani maarshaalmaaloowu juusii furdaa qabaachuu isaa hin beeku.
-Jechuun koo, isin yoo “New World Translation” yoo qabaatan...
-Ani nan qaba.
-...Otuu sitti agarsiisee nan gammada. Garuu isin na amantuu?
-Garuu isin waan tokko ni beektuu? Maxxansi haaraa torbee darbe bahe ni jira.
-Innis Marshmaalloo jedha ta’a garuu nan ilaala.
-Ani ilaaluun qaba.
-Sana ilaalchiisee qabxiin koo kana dha: Uummatni ala jiru kun hundi hoo -
Kan akkas jedhee isinitti himu isin kana yeroo miliyoona tokko dhageessaniitu; Ani yeroo miliyoona tokko dhagaheera -
"Ooh, Kitaabni qulqulluu waanta walmormuun guutameera”?
-Ani yeroo hundumaa dhagaha.
-Walfaallaa uumuuf ajandaan hin jiruu, ….. gochuuf,
-Akka isaan …… hin goone
-...ykn Kitaaba qulqulluu keessa waanta fafaa akka hin gachine gochuuf,...
-Lakki, lakki, lakki, lakki.
-...waantoota fafa fakkaatan kan akka
,“Saa’ool yeroo aangoo fudhatee bulchuutti ka’e waggaa tokko ture,” jedhan Kitaaba qulqulluu keessa galchuu"?
- Saamu’eel : kan maxxansa King James akkas jedha, "Saa’ool waggaa tokko aangoo irra ture;
inni Israa’eeliin waggoota lamaaf bulche…” Maxxansa Idilee Ingiliffaa (English Standard Version) keessatti, jechi kun akkasitti jijjirameera,
"Saa’ool lwaggaa tokkoof jiraatee, sanaa booda Mootii ta’e".
- Saamee’ul : kan maxxansa “Duway Rhemes”, kan Kitaaba Qulqulluu Kaatoolikii keessatti:
"Saa’ool yeroo aangoo fudhatee bulchuu eegaleetti daa’ima waggaa tokkoo ture,
Inni Israa’eeliitiin waggaa lamaaf bulcheera."
-Waanta jechi kun nutti hime beektanii? Saa’ool yeroo mootii ta’eetti daa’ima waggaa tokkoo ture.
Rakkoon sun asi: Saamu’eel : aakkas jedha, "Uummata hunda kan caalu, salgiissaa fi isaa ol hojjaan isaa dheeraa ture.”
Tole, akkaataa Maxxansa Idilee Ingiliffaa (English
Standard Version)tiin, Inni yeroo mataaniifi salgiinsaa namoota hundaa caalutti umuriin isaa waggaa tokko ture.
Inni daa’ima guddaa tokko ture.
Ani kanan isiinitti himuuf jedhu Kitaabootni qululqulluu kunneen qulqullina kan hin qabne fi salphifamanii kan dhiyaatan ta’uu isaaniidha.
Darbee darbee ani lubbuuf ooluufi namoota gara Kiristoositti deebisuuf yeroon bahu, namootni akkas naan jedhu, “Ani Kitaaba Qulqulluutti hin amanu
sababni isaas Kitaaba Qululluu keessa dogongorawwantu jira.”
Ani immoo akkas jedha, “Mee tokko natti agarsiisa.”
Isaanis “NIV” harkisanii baasu. Anis akkas jedha, Natti hin argisiisna – Ani dogongoroota isa keessa jiru isin agarsiisuu nan danda’a.
Waldiddaawwan isa keessa jiru isinitti agarsiisuu nan danda’a. Dogongora tokko kan Kitaaba Qulqulluu King James keessa jiru natti agarsiisa.
Tokko hin argitan.”
-Maxxansaawwan hammayyaa jijjiiraa kan biraa godhan ammo kunoo dha, Galaatiyaa Boqqonnaa shan:
"Isaan waantoota isin hiphisan keessaa ni baasu natti fakkaata.”
NIV’n akkas jedha, "Namootni jeeqtoota ta’an,
daandii hunda deemanii of dadhabsiisuu qabu jedheen hawwa!"
Akkuma Kitaabni Qulqulluu Ergamaa Raajichi Phaawuloos akkas jedheera jedhee kan nu barsiise wajjin walfakkaataa?
Isinis akkas jettu, “Tole, isaan NIV keessatti akkas kan jedhan natti hin fakkaatu.”
Akkasumas, Kitaabni Qulqulluu Ingilifa beekameen barreefame kanaaf akkanatti hiikee,
"Namootni isiniin aarsan mataa isaanii kolaasu jedheen abdadha!"
OrAkkam Maxxansaan Ingiliffa hammayyaa (CEV) hoo? Ani inni kun mana kitaabaa Kiristaanaatti akka gurgurammaa jiru argeera.
"Ani namootni isiniin aarsan hundi
kitaanamuu qofaa otuu hin taane qaamni saalaa isaanii caalaan irraa cituu qaba jedheen hawwa!"
Kanan jedhu waanta kana dhageefachaa jirtuu? Sababni isaa jechi “muramuu” jedhu, of dadhabsiisuu ykn
Kol’auu ykn qaama salqunamtii of kuutuu wajjin walitti hidhata hin qabu.
Phaawuloos waa’ee namoota Jecha Waaqayyoof hin ajajamne,
kanneen qaama isaanii of irra kutan ilaalchisee Kitaaboota Kakuu Moofaa caqasuun nutti himaa jira. Ilaali, Fakkeenyoota kanaa kan dhibbbaan lakkkaawwaman hunda isinitti argisiisuuf yeroo hin qabu.
Kan inni jedhu hundi, isaan
Humna waaqayyootiin bahuu qabu, isaan akka citan, hawa; isaan
Waaqayyootiin barbadaahan hawa. Jechi “cituu” jedhu kanadha. Isaan waaqayoon
ni barbadahu ykn “Cituu” jechuun isaan mana amantaa hordoftootaa keessaa ni bahu
Gumii keessaa ni bahu, saba Israa’eel keessaa in bahu.
Jecha “Cituu” jechuun akkana. hat's the term "cut off", but namootni gufuu ta’an maxxansaawwan hammayyaa isaaniitiin
Jecha Ergamaa Phaawuloos ta’aa jiru, “Namoota jarrootni kunneen akka of dadhabsiisan hawwa.
Isaan hundi akka of kolaasan hawwa.
Isaan hundi isaanii akka of kutan hawwa." Kanan jedhu inni gonkumaa waanta inni barsiise miti.
Baay’ee waanta hin baramnee fi keessumaa dha.
Garuu maxxansaawwan haaraa kunneen waanta maraataa hedduu kan Kitaabni Qulqulluu akka fafaatti akka ilaalamu godhan of keessaa qabaachuu qofaa otuu hin taane,
Isaan ajandaa uummata Ajaja Addunyaa Haaraatiif qopheessuu jedhu adda baasanii kan qabatani deemaa jiran dha.
Qaama qophii sanaa keessaa tokko maalis ta’e maal mootummaatiif Kiristaanootni akka ajajaman amansiisuu dha.
Dubbisni furtuu isaan
Jijjiiran Roomaa dha.
-Ani of aboomuuf bilisa dha. Ani bilisummaawwan koo keessaa muraas addaan kutuuf bilisa dha.
Ani aangoo mootummaa qaama qabuuf iyyata dhiyeessuuf bilisa dha. Mootummaawwan gaarii hin taanellee
Daandiiwwan irratti ajaja kennamu fudhatanii hojii waaqayyoo ni hojjetu.
Mootummaan Sooviyeet Yuuniyeen kan Istaaliin hogganamaa ture Hojii Waaqayyoo hojjechaa ture.
Chaayinaan yeroo Ma’oo Zee Doongi jalatti yeroo bulaa turteetti hojii Waaqayyoo hojjechaa turte. Mootii Kabajaa.
Moootiinn hojicha barbaadees barbaaduu baatees hojjedha.
Isaan barbaadanis barbachuu baatanis, Bulchaa keessan kabajaa; kantiibaa keessan kabajaa;
-Namni hidhannoo hidhachuu danda’u hin jiru. Nuti Meeshaalee hunda fudhachuuf jenna.
[Sagalee olka’ee balballi rukutamu]
-Guyyaa har’a New Orleans keeessatti mormii cimaa ta’e hudduun isaan qunnameera.
-Qajeelcha Poolisii! Isin mana jirtuu?
-Bakkaawwan lolaatiin miidhaman qofaa otuu hin taane
naannoolee ol’aa kanneen gogaa fi sooreessa ta’an kan New Orleans
-Garuu Bubbee Galaanaa Kaatrinaa kan New Orleans keessatti qaqqabe hordofee yeroo hojiin balaa ariifachiisaaf qaqqabuu taasiifamaa jiruttiMeeshaa waraanaa ykn qawee dhaaluunis taasifamee ture.
Looltootni waraanaa U.S. bakkichatti dhufaniiru.
Sodaa uummataa salphisuufi mormii to’annoo jala oolchuun murteessaadha,
Gareen Deegarsaa Lubbootaa jedhamee kan waamamu what the Clergy Response Team as it's called
Hojii New Orleans keessatti hojjetame kana bifa walfakkaatuun deegareera.
-waanti inni duraa nuti nama kamittuu himnu, “walgargaaree waanta kana asi irratti haa dhaabnu;
sanaa booda erga kisaaraan uumamaa jiru dhaabatee
adda addummaa jiru ni furra.”
-Gareen deegarsa balaa lubaa akkanaa
fedhiiwwan mootummaa fi uummaa gidduu foowaa hidhaa irra deemu.
Lubaaf, meeshaan isaasaa inni guddaan uummatni akka tasgabahuuf deegarsa gochuu
Ykn seera kabajuu jechuun Kitaaba qulqulluu keessummaa immoo Roomaa Boqqonnaa dha.
-Sababni isaas mootummaa waaqatu muuda. Kun kan nuti amantaa Kiristaanaa keessatti itti amannu dha.
Kitaaba qulqulluu keessattis inni ibsameera.
-Garuu afachu daqiiqaa tokko obsi. Ofiseerri poolisii gara mana koo dhufee otuu akkas jedhee hoo, “
"Garbicha nana, konkolaataa koo miici"? Kitaabni qulqulluu jecha isaa kanaaf akkan ajajamu na dirqisiisa?
Tole, Ofiseerri poolisaa waanta seeraan ala ta’e tokko akkan hojjedhu yoo nagaafate hoo? Jechuun koo, poolisiin natti dhufee otuu akkas jedhe hoo,
"Beekataa? Ani akka ati dallaa ollaa kee yaabdee mooraa ollaa
keessa seentee akkatti karaa foddaa waanta ollaan kee hojjechaa jiru akkati ilaaltuun barbaada.
Akka ati ollaa kee naaf basaastuun barbaada"?
Kanan jedhu jecha kanaaf ajamuun qaba? Isin akkas jettu, "Ati fakkeenyoota fafaa ykn gowwummaan gutaman fudhata."
Sirrii dha. sababni isaa mootummaan ollaa isaanii ykn bakka biraa uummata ajaju kamiyyuu gonkumaa hin jiru.
Kun gonkumaa hin uumamne. Sirrii miti?
Mootummaa Naazii kan Jarman bira waanti akkanaa hin ture; Waanti akkanaa Sooviyeet Yuuniyeenii keessa hin ture;
Afaan keessan qabadhaati waanta isinitti himame kabaja. Roomaa dubbisa
kaayyooo mootummaan namoota yakka raawwatan itti adabuuf nu ibsa,
Jireenya keenya gama hundaan to’achuufi maal gochuu akka qabniifi to’annoo jala nu oolchuuf miti. Dabalataan
Waanti furtuun Roomaa keessatti baranne aangoo abbootii taayitaa kabajuu dha.
Kanaafuu fakkeenyaaf, Ameerikaa keessatti, Mootummaa sadarkaalee adda addaa irra jiran qabna. Hin qabnu?
Seerri ol’aanaa biyya keenyaa isa kami? Tole, duraan dursa, Seera Waaqayyoo dha.
Dura Waaqayyof ajajamna. Achii itti aanee Heera Mootummaa Ameerikaa
Sababni isaa Heerri Mootummaa Ameerikaa Seera mootummaa biyyattiidha.
Isin akka jettu, “Tole, Kitaabni Qulqulluu mootii kabaji jedha, kanaafuunuti Obaamaa kabajuu qabna.”
Garuu, seekoondii tokkoof hafachu. Obaamaan mootiidha? But hold on a second. Mootummaan keenya sirna mootiiitiin bula?
Nuti abbootii taayitaa uummataaf deebii kennan filanneera jedheen yaada
Isaanis seeraan ol miti; seerri ol’aanaan biyyattis heera mootummaa Ameerikaa dha.
Kanaafuu, nuti mootummaa nurratti muudame kan kabajnu yoo ta’e,
Nuti seera biyyattii kan kabjnu yoo ta’e,nuti heera mootummaa kabajuun nurraa eegama jechuudha.
NIV’n barsiisa kana guutummaa guutuutti keessaa haqee jira.
Kitaabichi akka ati abbaa taayitaa ol’aanaa wajjin waliigaltee deemtu si hin barsiisu. Inni akkas jedha:
Akkuma beektan kana jechuu irra “Lubbuun hundi abbaa taayitaa haa kabajdu.
Taayitaan kan Waaqayyoo malee kan biraan waan hin jirreef: aangoo ykn taayitaa Waaqayyo kenne ykn muude”,
Namni kamiyyuu aangoon ykn taayitaan Waaqayyo irraa yoo kennameef malee lafa irratti taayitaa argachuu hin danda’u
Daa’imman maaliif maatii isaanii ajajamuu qabu?
Sababni isaa waaqayyo waan jedheef dha. Sirumaa maaliif muutummaa dhala namaaf maaliif abbomamna? Mootummaa dhala namaa maaliif kabajna?
Sababni isaa Waaqayyoo Mootummaan dhala namaa
akka namoota yakka dalagan adabuuf, namoota qulqulluufi homaa hin beekne
gocha namoota isaan irratti haleellaa raawwatani irraa ittisuuf akka nu barbaachisan waan nutti himeef dha. Kunoo Kitaaba “New Living Translation” Roomaa : keessatti,
"Taayitaan hundi waaqayyo irraa waan dhufuuf, namni hunda abbootii tayitaaf aboomamuu qaba,”
- Kana ilaala - "and Namootni aangoo irra jiranis waaqayyo isaan kaahe.”
Amma sun dhugaa miti. Kitaabni “The New Living Translation”
namootni aangoo irra jiranis waaqayyo isaan kaahe jedha.
Kun sirrii miti, sababni isaas gaafa tokko Mormaan Kiristoos Seexanaatiin aangoo irra kaahamuu ni danda’a.
"Taayitaa isaa Diraagoonitu kenneef,” jedha Mul’ata Yoohaannis irratti.
Sana qofaa miti, Hoosee’i [:], keessatti akkkas jedha, "Isaan ofii isaanii mootii muudaniiru garuu anaan kan muudame miti”
Fedhii waaqayyoo irra darbuun aangoon ykn taayitaan dhala namaa yeroo hedduu namaan muudameera.
Kanaafuu, “the New Living
Translation” lakkoosa irratti akkas jedha, "Hojjetoota mootummaaf miindaan waan kanfalamuu qabuuf, gibira keessan kanfala.
Isaan waanta hojjetan keessatti waaqayyoon tajaajilu.
Nama tokkoon tokko irraa waan liqeefatte deebisiif: Gibiraa keessaniifi kanfaltiiwwan mootummaa qaamoota funaannitti kanfala”.
Nagaan bula! Amma dhimmichi dhimma gibiraa miti; dhimmichi dhimma kanfaltii miti,
Isaan sun baay’ee badaa dha. Kitaabni qulqulluu King James daangaa murtaahe,
ulaagaalee hojii isaanii muraasa keessatti mootummaaf akka ajajamtan isinitti hima, what
Yeroo ilaalamuufi madaalamu isaan maal hojjechuu qabu,
mootummaa akkamitu aangooo irra jira yaada jedhu irratti hundoofne akka kabajnu nutti hima.
-Kitaabni qulqulluu Kinng James inni haaraan maaliif foyyeessuuf hin kakaane? Sababni isaa sanadoota barreefama hundee walfakkaatan fayyadame.
-Tole, innoo hin goone. Bakka hedduutti Kitaabni King James inni haaraan
waanta “Textus Receptus: fi kitaaba King James jedhu irraa adda baha.
-Kakuu haaraa keessatti miti.
-Inni kana godheera.
Inni TR irraa bakka itti adda bahu heddutu jiru.
-Kitaabni qulqulluu King James inni haaraan maxxansaawwan hunda caalaa balaa qabeessa ta’e dha.
Sababni isaa “Ooh, inni Kitaaba King James wajjin tokko dha akka jettaniif; inni caalaatti hammaayaa ta’ee jechoota bara kanaa ofitti makatee kan dhiyaate dha”jettanii akka isin yaadan isin godha.”
Otuu inni sana ta’eera ta’e ani isan guddisa ture.
-sababni isaa namootni NIV ukee caammaa kudhan dheeratu hin xuqqine yoo ta’e -
IsaanESV ykn “the New Living Translation” ulee caammaa –kudhaniitiin hin xuqana,
Garuu isaan akkas jedhu, “Maaloo, Paasteer Andarsan, Kun Kitaaba Qulqulluu King James isa haaraadha? Kun Kitaaba Qulqulluu King James wajjin walfakkaatu.
Inni jechoota 'thees' fi 'thous' keessaa base.
Inni akka namaaf galuuf xiqqoo bifa salphaatiin dhiyaachuu irraa kan hafe Kitaaba Qulqulluu King James fakkaata."
Tole. Waa’ee Kitaaba Qulqulluu King James isa haaraa ilaalchisee ragaalee lakkoofsootaan deegaraman muraasa isinniif kenna. Kitaabni Qulqulluu King James isa haaraa
Jecha “Gooftaa” jedhu yeroo keessaa hanbise. Jecha “Waaqayyo” jedhu yeroo keessaa haqe ykn baase.
Kitaabni kun jecha “Jannata” jedhu yeroo keessaa baase, Kitaabni kun jecha “dhiifatama ykn gaabbii” jedhu yeroo keessaa baase,
Dhiigni yeroo keessaa baheera. Jechi “Jaahannama” jedhu yeroo keessaa hambiseera,
Kitaabichi jecha “Jehoovaah” jedhu guutummaa guutuutti keessaa baaseera, Kitaabichi jecha “Jahaannama seenuun adabamuu ykn damnation” jedhu guutummaa guutuutti keessaa baaseera,
Kitaabichi jecha “Kakuu Haaraa” jedhu guutummaa guutuutti keessaa baaseera, Kitaabichi jecha “Seexana” jedhu guutummaa guutuutti keessaa baaseera.
Kitaabni qulqulluu kan duriifi kan barri irraa darbu miti; isin beekumsa ol’aanaa ni argatu. Isin qo’annoo muraasa gaggeessuu qabdu.
Isin afaanicha barachuu qabu. Ijoolleen koo warri xixxiqqaan hubachuu danda’u jechuun baacoo dha,
Isin buleessa taatanii hubachuu hin dandeenye?
Namootni Kitaabni Qulqulluu King James hubachuuf cimaa ta’uu isaa sitti himan
isin waanta Kitaabni qulqulluun jedhu beekuu barbaadnaan Afaan Giriikii akka baratan sitti himuun isaanii nama ajaa’ibu?
Eeyyeen, inni dhugumattuu hubachuuf salphaadha.
"Kitaabni King James isiniitti ni Cima. Kitaaba Kakuu Haaraa kan Afaan Giriikii kunoo. "
Namootni kunneen fafee dha.
Kanaafuu, mee keewwattoota muraasa xinxallee hubachuuf kamtu salphaa akka ta’e ilaala.
Kitaabni King James waa’ee gosa mukaa, “oo’aak” .
Kitaaabni Qulqulluu King James inni haaraanis bifuma walfakkaatuun “Oak” jedhee haaluma cimaa sanaan barsiise? Dhugaa jettuu?”
Isaan “Muka Terebinth” jechuun jijjiraniiru. Inni xiqqoo hubachuuf ni salphata, sirrii miti? That's a little easier to
Amma mootootni : Kitaaba King James keessatti gaalee baay’ee ulfaatu qaba,
"biiftuun baate ykn bariihe".
Tole? Ani kanan jedhu kuna kitaaba ijoollee "Hop on Pop" jedhamu keessatti ta’uuu danda’a.
"Aduun bariite". Isaan kana gara “Qarqa Heerees”tti jijjiiran. "
Samu’eel : keessatti Kitaabni qulqulluu King James jecha cimaa “file” jedhu fayyadama. Kitaabni King James inni haaraan So the New
Jecha sana gara “pim” jedhuutti jijjireera. P-I-M. "Pim". Jechuun koo , inni kun feetu maaraashaa beekuun gaarii ta’a.
Garuu ani gonkumaa jecha kana dhagahee hin beeku. Tolee?
Saamu’eel : dhugumatti jecha baay’ee cimaa “muka” jedhu fayyadama. Kanaafuu Kitaabni King James inni haaraan
Jecha kana hubachuuf xiqqo salphisuuf jecha gara “Muka Axaaxii”tti jijjiiruuf murteesseera.
Saamu’eel :; Kitaabni King James "cornet" jedha.
“Koorneet” maal akka ta’e eenyutu beeka?
Gosa xurumbaadha, sirrii miti? Inni gosa Tipaampeetii dha.
Kanaafuu jecha salphaa ta’e “Tsanaatsilii” fayyadamuuf murteessan. .
"Tsanaatsilii". Sababni isaa namni hunduu "Tsanaatsilii" jechuun maal akka ta’e ni beeka.
“Tsanaasiliin” jechuun maal akka ta’ee eenyutu beeka?
Kunnoo achi dhaqa.
Isaaayaas : Kitaaba Qulqulluu King James keessan keessatti jecha ulfaataa “nama” jedhu itti fayyadameera.
Ani kanan jedhu, Nagaan bula! Kitaaba Qulqulluu King James gara Goda hambaa isaatti deebisa. “Nama”?
Waanta ani hubachuu danda’u naaf kenni. "Kan du’u" jechi jedhu wayya, sirrii miti?
Daani’eel : ujechaa dhugumatti ulfaatu “mootiiwwan ykn princes” jedhu fayyadameera. Kanaafuu isaan jecha salphaa
"satraps" jedhu kitaaba King James isa haaraa keessatti fayyadameera.
"Baandiin" kan Kitaaba keess; innii baay’ee cimaadha. Jecha kana gara “garee”tti haa jijjiiru.
Tole, jecha “bulbulaa cirachaa ykn quicksand” jechuun maal jechuu akka ta’e namni hubatu hin jiru. Jechaa baayee’ kan durii dha.
Hojiiwwan Ergamootaa : keessatti "Quick sands ykn bulbulaa cirachaa" kan jedhu maal? Jechi "Syrtis Sands" jedhu hubachuuf baay’ee salphaa dha.
Isin otuu Kitaaba King James kan hubachuuf baay’ee salphaa ta’e argatanii gaariidha.
Kitaabni King James inni haaraan Kitaaba King James irra hubachuuf dhugumatti salphaadha?
Kanan jedhu, Kitaabni King James kan itti caalaa salphaa ta’uusaa mirkaneessinu fakkeenyoota hedduu kaasneera. Inni nuti kaasne
Tarreefama guutuu hin ture. Inni fakkeenyoota hedduudha. Kanaafuu, dhugumatti hubachuuf salphaa gochuun walitti dhufeenya hin qabu;
Kun kan godhamu
Jechicha jijjiiruuf, dabsuuf, miciruuf, jajjalisuuf yaadameeti dha. Kan isaan caqasuu fi dubbachuu danda’an inni qofaan,
"Kun bakkatti caalaatti salphaa gooneedha”,
Jechoota kan akka "thees" fi "thous"baasuun, garuu isin jechoota kunneen qabaachuu qabdu.
Sababni isaas "thees" fi "thous" waantoota qeentee kan agarsiisan yoo ta’u
jechootni "you, yee, your" waantoota hedduu mul’isu. Waantootni TH tiin ka’an qeenxee dha; waantootni Y tiin eegalan hedduu mul’isu.
Kun hiika isaa irratti dhiibbaa ni fida
sababni isaas yoo jechoota "thees" fi "thous" jedhan sana akka isinitti himaniif qabaachuu baattan isin karaatti kitaabichi waa’ee qeenxee ykn
garicha guutuu jechuu akka ta’e karaatti addaan baaftanii beektan hin jiru.
Sun faayidaa qabeessa dha. Hundi isaanii ni fayyadu.
Garuu ani jijjiwamawwan amantaa muraasa kanneen amanticha jallisuu danda’an kan Kitaabni Qulqulluu King James inni haaraan raawwate isinitti agarsiisa.
Gara Qoronxoos : deema ilaala.
-"Jechi fannichaa kanneen badaniif gowwummaa,
nuuf warra fayyinuuf garuu Humna Waaqayyoodha."
-Obboleessa koo Garreett, isa Kitaaba King James isa Haaraa keessaa sirriitti sagalee ol kaasaa naaf dubbisa.
-Hubadha, Kitaaba King James keessatti nuti fayyineera jedha. Kitaaba King James isa haaraa keessatti
nuuf warra fayyinuuf jedha. Adda addummaa gudda dha. Sababni isaa fayyinsi adeemsa miti.
Fayyinsi yeroo tokkotti, hamma milluu ijaatti uumama, Nuti
Kiristoos in amana, du’aa gara jireenyaatti ceena. Kun adeemsa miti.
Ani adeemsa keessa hin fayyu; Ani adeemsaan hin fayyine!
- Qorontoos : akkas jedha: " Namoota fayyiniifi kan badaniif,
Waaqayyootiif foolii Kiristoos dha hoo, ".
Kitaaba King James isa Haaraa irraa naaf dubbisa.
-" Namoota fayyinuufi kan badaniif,
Waaqayyootiif foolii Kiristoos dha hoo."
-Ammas, kan fayyaniif hin jedhu, kan fayyinuuf jedha
akka waan fayyinni adeemsa ta’eetti.
Fakkeenyaaf Kitaaba King James isaa Haaraa Maatewos : keessatti akkas jedha, "daandiin gara jireenyaatti geessu ulfaataa dha;
namootni daandicha argatanis muraasa dha." Kitaabni King James akkas jedha,
"hiphoo" kunis namootni meeqa akka irraa deeman ibsa, Naamootni muraasni akka fayyiinsa argatan ibsa.
Kitaabni King James inni haaraan jecha kana ulfaataa jedha.
Amma, otuu daandichi hojiitiin Mul’ata ta’e , cimaa jedhamuu danda’a ture.
-Kitaabni “New Living Translation” akkas jedha, "Garuu hulaan gara jireenyaatti geessu baay’ee baay’ee hiphoodha;
daandichis cimaadha; namoota muraasatu isa argata.” Kitaabni “The English Standard Version”
Akkas jedha, "Balballi gara jireenyaatti geessu hiphaa akkasumas daandiin isaa cimaa waan ta’eef namoota muraasatu argata”.
Amma ega isin akkas jettu, “Tole, Paasteer Jimeeneez, rakkoo guddaa maal qabaree?
Sorooroo, hiphoo? Ulfaataa? Ulfaataa, cimaa?
Maanni rakkoo guddaan uumame?" Kunoodha rakkoo guddaan: Fayyuuf ni cimaa?
-Heey, Yesuuss hojii isa cimmu hojjeteera. Kennaa fudhachuun akkamiin cima? Bishaan dhuguun akkamiin cima?
Hulaa balbalaa keessa deemanii darbuun akkamiin cima? Daabboo xiqqaa nyaachuun akkamiin cima?
Waantootni kunneen kan Yesuus fayyina waliin madaale dha.
Sababni isaa fayyuun salphaa dha; Isin Jannata seenuuf karaa keessan qixeefachuu hin qabdan.
Kitaaba Qulqulluu isa Afaan Ibraa’isxiin barreefame keessatti fayyinsi maal jedhamee
akka ibsame ni beektu? Boqonnaa
Ilaala, boqochuun ni cimaa?
Maxxansaawwan hammayyaa kunneeniin hin gowoomina. Isin gaafa tokko qormaatni isin mudachuu ni danda’a:
"Ooh, akkuma beekatan, bataskaanni kun Kitaaba Qulqulluu King James isa haaraa fayyadamti, kanaafuu maal haa ta’uree?"
Kun rakkoo guddaa dha.
Nuti kitaaboota qulqulluu adda addaa kanneen Afaan Ingiziidhaan barreefaman barbaadna jettanii yaadu?
-Lakki. Dhugumatti, kitaaboota hedduu qabaachuu keenya ibseen jira. Kana caalaa hin barbaadnu.
Waggoota kudhan darban hedduu keessa maaliif akkanatti baayyatan sababni gahaan jira natti hin fakkaatu.
Ani sababa isaa nan beeka.
-Kun dhugumatti salphaa dha. isin mana maxxansaa qabdu yoo ta’eefi hojii kitaaba qulqulluu qo’achuu ykn waanuma isa fakkaatu yoo hojjetu ta’e,
- ani hojii kitaaba qulqulluu qo’achuu hin deegaru.
-Anis hin deegaru.
-wWaanti isaan godhan, yoo isin mana maxxansaa guddaa kan qabdan yoo ta’e, isin kanfaltii nama biraatiif kanfaluu hin barbaadu,
Kanaafuu hindi isaanii turjumaana mataa isaanii hojjetan.
-Sirriidha. Fedhiin maallaqaa isaan irra bule,
Maxxansaawwan adda addaa kana hunda akka isaan baasan isaan godhe.
-Ni jira. Waa’een kanaa gaaffii hin qabu.
-Waaqayyo Kiristaana amantaa isaatti gidduu galeessa ta’e Kitaaba Qulqulluu isa muummee akka baratu irraa ni eega?
- Waaqayyo Kiristaana amantaa isaatti gidduu galeessa ta’e odeefannoo argate akka itti fayyadamu irraa ni eega.
Nuti dhaloota kan biraa kamiyyuu caalaa odeefannoo hedduu guyyaatti argachuu
dandeenyu keessa kan jirannu yoo ta’u nuti odeefannoo kana amma ni barbaana.
Sababni isaas haleellaawwan kunneen gonkumaa caalaatti gocha seexanaa hin taane.
-Balaa ni argitu, tole – sababni isaan kun amantaa ani waa’ee kanaa qabu dha. Namni tokko I think if someone
Otuu Afaan “Koine Greek” baratee sirriitti afaanicha beekee fi
addaan baasuu akkasumatti sirriitti dubbisuu danda’ee gaarii dha jedheen yaada, garuu…
-Afaan Giriikii xiqqoo xiqqoo beekuun waanta balaa qabeessa ta’edha.
-Sirriidha. Balaa isaa hin agartu, namni tokko Kolleejjii Kitaaba Qulqulluu Giriikiitti seemisiteera lama baratee,
Amma kunoo, isaan ol ka’anii akkas jedhu-
akka waan Kitaaba King James qofaa ta’eetti Kolleejjii Kitaaba Qulqulluu Giriikiitti seemisiteera lama baratee-
“Ooh, turjummaanoota Kitaaba Qulqulluu King James,
Isaan kana sirriitti hin hiikne," jedha. Qalama harka waaqayyootiin, akkuma isin beektan,
Beektotni cimaa shantama waggaa torbaaf kitaaba kana ….. isaatiif
-Isteeveen, waanti gaariin kamiyyuu ni samaama ykn akka malee faayidaa irra ni oola. Afaan Giriikii xiqqoo beekuun waanta hamaa fi balaa qabeessa ta’uu ni danda’a.
Ani barnoota hunda isaa kan dhugumatti hiikaa jecha waaqayyoo badaa irratti hunda’e dhagaheera, tole? Garuu mee waan duba’a.
Waggoota hedduu dura, lallabaan tokko na bira dhufee akkas jedhe, “Heey,
Ani barnoota kana yaada ykn isba keessatti argeera. Garuu, sanaan dura nama akkas jedhu dhagahee hin beeku.
Isin Afaan Giriikii ni beektu. Kana naaf ilaaluu ni dandeessu?"
Kanaafuu, anis isaaf nan ilaaleef. Inno hin jiru.
Kun akkuma gabaasaa daandii gadi dhiisee dha. Yeroo tokko ani itti himnaan waan inni godhe ni beektu?
Hundumaafuu, inni ni lallabe.
-Sababni kana godheef waan gaarii ta’eefi waan jaalateef dha.
-Sabani isaa inni akka gaariitti lallabe.
-Kun qabxii ol’aanaa gaarii akkasi dha.
-Ooh, baay’ee gaarii ture.
-Inni anaan na ajaa hin dhibu.
-Akka carraa ta’ee Inni anaan na ajaa hin dhibu.
-Kitaabootni muummeen kakka’umsaa kan qaban ta’uu eenyuyyuu hin mormu.
[ Ergaa Pheexiroos :] Kitaabni Qulqulluun akkas jedhaa,
"Namootni dheebbifamoonni Afuura qulqulluutiin oofamanii dubbatan.”
Garuu isaan waanti nuti har’a ittiin kakaneetti hin amanne; sababni isaa isaan kitaaba qulqulluu eeguu isa jedhutti hin amanne.
Garuu akkuma beektan Kitaabni qulqulluun faarfannaa Daawit : keessatti akkas jedha,
"Aakka meetii lafa irratti qoramee, yeroo torba qulqulleefameetti jechootni ykn Dubbiin waaqayyoo qulqulluudha.
Yaa waaqayyoo ati nu eegi; dhaloota kana irraa bara baraaf nu baraari.
Akkuma beektan, waaqayyo jecha jajjabinaa nuuf kenne
Jecha jajjabinaa kana Waaqayyumti ni eega.
Waaqayyoo namoota cubbamtoota kunneen fayyadamee kitaaboota orijinaalaa nuuf kennuuf humana qaba jedhanii yaaduun waanta hin taane natti fakkaata.
Waaqayyo namoota cubbamoo kana hin fayyadamu.
Inni isaan kana irraa bara baraaf nu baraaru mirkaneefadhu?
Waaqayyoo jecha jajjabinaa nuu kennuuf aagoo kan qabu ta’uun amana;
Waaqayyo Jechoota isaa namoota kana irraa barbaraaf eeguuf
aangoo fi humna ni qaba jedheen amana.
Amma mee kana isin gaafadha: Namootni Afaan Ibraa’isxii ykn
Giriikii ykn Ingilizii baruu qabu ykn Kitaaba Qulqulluu afaan hundumaan qabaachuu qaba jettanii amantuu?
-Isaan Kitaaba Qulqulluu afaanoota hundaan qabaachuu qabu. Sababni nuti
Dhaabbilee turjumaanaa kan akka “Bibles International” deegaruuf kanaaf dha. Kitaabni “The Textus Receptus” fi
Kitaabni Qulquluu Afaan Ibraa’isxii ifatti gara Afaanoota biraatti kan hiikaman yoo ta’u
hojiiwwan afaan kunneen hojjetamaniis Jechoota Waaqayyoodha.
Uummatni tokkoon tokkoon isaa Kitaaba Qulqulloo afaan isaaniitiin qabaachuu qabu jennee amanna,
Inni Ingiliffaa immii Kitaaba Qulqulluu King James dha.
-Mee akkas jechuun dubbii koo cufa: Jechi Waaqayyoo dhaloota ammaa biratti eegamaa dha.
Isaayaas : dhaggeefadha. "Jechi koo isaan bira jiru waadaan koo kana dha, jedha Waaqayyo;
Afuurri koo kan sirra jiru, jechi ani afaan keessa kaahe haraa eegalee hanga bara baraatti afaan kee keessaa,
afaan sanyii hidda kee keessaas,
sanyii sanyii hidda kee irraa hin darbu, jedha waaqayyo.”
Inni akkas jedheera,” Isaayaasiin ilaala. Jechi atti lallabdu, sanyiin hidda kees ni lallaba.
Ijoolleen keessaniifi ijoolleen isaanii fi
ijoolleen ijoollee isaanii bara baraa jechoota kan ni lallabu.”
Ani jechoota yeroo ammaa harka koo keessa jiranitti amana. Ilaala, maxxansaawwan hammayyaa
NIV ta’e ESV, Kitaaba “the New Living Translation”, ykn
Kitaaba King James isaa haaraa ta’e, falaasamichi Jechi waaqayyoo hin eegamne falaasama jedhu dha.
Nuti deemnee haaraa qotnee barbaaduu qabna. Nuti rakkoowwan isa keessa jiran hunda sirreessuuf barreefamoota sanadaa duraanii deemnee qotnee barbaaduu qabna.
Lakki, ani Jechiichi bara Kiristoos hanga ammaatti eegamee jira jedheen amana.
Inni kan darbe waan ta’eef waanti nuti har’a of harkaa qabnu
koppii jecha gadi dabarfamee isa yeroo hedduu koppii ta’e dha.
Namootni hedduun karaa dogongoraa akkas jedhanii amanu, Kitaabni Qulqulluu King James waggoota hedduu jijjirameera,
Maxxansaan bara kan nutti har’a itti fayyadamnu kan bara irraa adda jedhu.
Garuu waanti kan bara keessatti jijjiirame inni qofaan
tarreefama qubee (spellings), sirna qubee guddaa fi xiqqaa fayyadamuu (capitalizations), sirna fayyadama mallattoo barreefamaa (punctuation), dogongorri barreefamaa (typos) muraasni sirreefamaniiru. Jechootni hin jijjiramne.
Jechootni nuti hara Kitaaba Qulqulluu King James keenya keessatti qabnu jechoota turjumaanoota bara tiin nuuf kenname wajjin tokko dha.
Jechootni kunneen hin jijjiiramne.
Jechhootni kunneen eegamaniiru,
Kunis akkuma Waaqayyo jecha isaa nan eegaa jedhaa waadaa nuuf galeen dha.
Inni akkas jedha, ilaala, “Samiifi lafti ni darbu, jechootni koo garuu hin darban.”
Inni yaadoota hin jenne; inni akeekawwan hin jenne; inni amantaa hin jenne.
Inni akkas jedhe, “jechootni koo hin darban.” Maxxansaawwan haaraa kunneen madda jalllatte irraa kan fudhatamani dha.
Bu’aan ykn firiin isaaniis kan jallate dha. Bu’aa maxxansaawwan haaraa kanaa ilaala.
Ilaala waanta bataskaanootni ta’an: Gidduu gala bashananaa fi baacoo Sababa maxxansaawwan haaraa kunneen irraa kan ka’e
waanta bataskaanootni ta’an ilaala: namoot hin fayyineen guutaman.
Namoota amantii hin beekneen guutaman, namoota waa’ee amantaa dhimma hin qabneen guutaman,
Sababni isaa yeroo isin kitaaboota waldiddaatiin guutame dubbistan,
Waa’ee amantaa dhimmamuun ni cima. Garuu, isin kitaaba sirrii, qulqulluufi eegame yoo dubbistan,
Akkuma beektan, jecha hundumaa argatu,
Waa’ee amantii in dhimmatu; waa’ee waan inni dubbatuu ni dhimmamtu, waa’ee waan jedhuu in dhimmatu,
akkasitti akka hubatan miti, "Tole, eeyyee, Ani dhimmacha beeke. Yesuus fannoo irratti du’e.
Ani beeke. " Lakki, Ani amantaa Waaqayyo Jecha Waaqayyoo irraa anaaf qabu
tokkoon tokkoo isaa addaan baasee baruun barbaada.
-Beektanii, Kitaaba kana qabaatanii qo’achuun waan tokko.
Waa’ee dhiirootni, dubartootni fi ijoolleen irra deemuu qaban ilaalchisee fagoo irraa hubachuu.
Kunis isiniifi ani Kitaaba har’a Kitaaba Qulqulluu jedhamee waamamu sodaa dararaa tokko malee akka dubbisuu dandeenuuf dha.
Baay’ina kana dubbachuun salphaa: Sababa kitaaba kana dubbisaniif namootni , gubataniiru,
Agaatiin rebaniiru, aaraan akka bokokan godhamaniiru.
-Ani ganamaan ka’ee ykn halkaan turee nan qo’aadha, Kanaafuu ani,
Ganama yaada qabadhee sa’aatii : ka’ee dhaqee kitaab qulqulluu dubbisa ykn qowadha.
Isinis akkam akkani namatti tolu fi ergaa inni dabarsu ni agartu,
isinis akkauma waana isiniif kenname hangam guddaa akka ta’e gadi teessanii beektaniin himammaan maddii keessani irra ni bu’a.
Kanaafuu, yeroo ani Kitaaba Qulqulluu King James qo’awadhu,
Golgaa isa duubaa hanga isa duubaatti waanti ani harka koo irraa qabu Jecha ykn Dubbii Waaqayyoo ta’uu guutummaa Guutuutti nan amana.
Kun kan amma jiru waanta sa’aatii tokko booda kan jiru wajjin tokko ta’uu nan amana.
Sababni isaa jechichi kan eegame dha fi kan walfakkaatu dha. Ani isa banee Guyyaa Dilbataa yeroo irraa lallabiifi
isa irraa mana barumsaa Dilbataatti yeroon barsiisuu ykn yeroo daandii irratti dhugaa bahu ofitti amanammaan qaba.
Kun jecha Waaqayyoo ta’uu nan beeka.
Kan bara jireenya keenyaa qo’anne ragaa ni baana,
eebbaan jecha isaa isa duraa argachuuf abdii qabana.
-Waaqayyo gocha namootni kun keewwata jecha Waaqayyoo keessaa hanbisan, itti dabalan,
Waantoota biraa itti dabala, waantoota keessaa hambisan kanatti hin gammaddine. Mul’ata Yohaannis dhaqaa ilaala.
Mul’ata Yohaannis :; "Ani kana kan caafe, nama dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame dhaga’u, of eegachiisuudhan fi dhugaa ba’uuf nan jedha.
Namni dubbii kana yoo waa dabale, Waaqayyo adaba isa irratti dha’icha waa’een isaanii macaafa kana keessatti caafaman isatti dabaluuf jira.”
Isin macaafa Mul’ata Yohaannis dubbifatnii beektu.
Kitaabicha keessa dhibeewwan nama naasiisan hedduutu ni jiru. Jecha koo irratti yoo dabaltan
Adabbiiwwan kunneen isin irraan gaha jedha. Mul’ata Yohannis :; "Namni dubbii macaafa kana keessatti raajii dubbatame irraa yoo waa hir’ise immoo,
Waaqayyo Muka jireenya kennuufi mandarattii qulqulluu waa’een isaanii
macaafa keessatti caafaman keessaa qooda isaa hir’isuuf jira.”
Garuu namootni kunneen kanneen Jecha Waaqayyoo jijjiirani
carraa fayyuu isaanii akka dhaban macaafni qulqulluun ni dubbata.
Inni akkas jedheera, “Ani nan hir’isa.” Inni akkas jedheera, “akkuma isin jecha koo irraa hir’istan,
Kanneen macaafa keessatti caafaman keessaa qooda isaa hir’isuuf jira.” Inni akkas jedheera, “Isin Kitaaba Qulqulluu koo waan waliin dhooftaniif akka isin hin fayyin nan godha.”
Anatti Waaqayyo waa’ee kanaa baay’ee ciminaan kan itti yaadu natti fakkaata.
Sirrii dha, "Tole, Paasteer Jimeeneez, ani irratti walii gala. Ani nan hubadha. Kitaabootni qulqulluu kunneen jallataniiru.
Isaan amanataa jallisaa jiru. Kitaabni Qulqulluu King James qulqulluu dha. Kitaabni Qulqulluu King James
Jecha Waaqayyoo dha. Ani nan hubadha. Ani isaatiin maal itti godha?"
Isin yaadoota Waaqayyoo otuu hin taane Jecha Waaqayyoo harka keessan irraa qabachuu keessan yoo hubatan,
Kananni inni hin jenne garuu kan jedhe nutiiti fakkaatu, garuu Jechootni Waaqayyoo isa sirrii yoo ta’e,
Garuu isa sana miti yoo ta’e, garuu yeroo isin Jechoota Waaqayyoo yeroo qabaatan,
Waqaayyoo qabdu , Kitaaba kana miti, jechoota kunneen,Isin Jechoota Waaqayyoo qabaachuu keessan beeknaan,
Inni akka nuti Kitaaba Qulqulluu dubbisnu nu gochuu qaba. Inni akka nuti Kitaaba Qulqulluu kanaan jiraannu nu dhiibuu qaba.
Kitaabni kun jireenya keessatti gaaffii qabnu hundaaf deebii qaba.
Isin akkas jettu, “Paasteer Jimeeneez, Ani gara Bataska Veriitii Baaptistii dhufe; ani waa’ee Kitaaba Qulqulluu King James barachuuf asi hin dhufne.
Ani kanaan dhufe waa’ee fayyinaa barachuuf dha.”
Nuti waa’ee fayyinsa Kitaaba Qulqulluu King James keessatti barranneera.
"Ani waa’ee dhimma kanaa barachuuf asi hin dhufne. Ani asi kan dhufe waa’ee gaa’eela koo gargaarsa akka argachuu danda’uuf dha.”
Kitaabni kun waa’ee gaa’eela keessanii isin ni gargaara.
"Ani waa’ee Kitaaba Qulqulluu King James barachuuf hin dhufne. Ani asi kanan dhufe akkamitti ijoollee koo guddiisu barachuuf dha.”
Kitaabni kun ijoollee keessan guddiisuu irratti isin ni gargaara.
Inni rakkoowwan keessan hunda ni fura. Kitaabni kun fayyinsa isiniif fida
Waanta isin barbaadan hunda isiniif godha. Maaliif? Sababni isaa inni Jecha Waaqayyooo…. Dha.
...kan dogongora hin qabne, sirrii, akka Waaqayyo isa isiniif kenneen.
Jechi ykn Dubbiin Waaqayyoo sirrii ta’uu hubachuun ofitti amanamummaa naaf kenna. Namootni hedduun yeroo ammaa maaliif akka Waaqayyootti hin amanne,
Gara bataskaanaa maaliif akka hin dhufne beektu,
Dhalootni dargaggoo ammaa heddumatanii bataskaana dhiisanii kan bahaa jiran yoo ta’u gonkumaa deebi hin dhufan?
Sababni isaa maxxansaawwan kitaabaa qulqulluu isaan haaraa jallifamaniiru; kitaaboota kunneen keessa dogongorawwan ni jiru.
Akka isaan amantaa Waaqayyo irratti qaban akka shakkan isaan godha. Garuu kana miti.
Kun sirrii dha. Maxxansaan Kitaaba King James Jecha Waaqayyoo dha.
Isa warra kaaniif lallabba.
Mataa keenya gadi qabnee kadhanaan Waaqayyoo haa kadhannu. Abbaa keenya samii irra kan jiraattu,
Gooftaa, nuti Si jaalanna. Jecha keedhaaf galatoomi. Gooftaa, nuti Jecha kee akka eegnuuf nuutiin itti gaafatama gochuu dhiisuu keetiif galatoomi.
Garuu inni itti gaafatamummaa ati of keetiif kennite dha.
Ati isa jabeessiteetta, Ati isa eegdeetta, Ati isa har’a nuuf keenniteetta.
Abbaa, nuti si jaallana. Jecha kana asitti akka hin hafne nu gargaari.
Ergaan kun karaa gurra tokkoon galee karaa gurra biraa akka hin bane nu gargaari. Akka nuti erga kana hubannu nu gargaari,
“Ani Jecha Waaqayyoo qaba; ani isa dubbisuu qaba ta’a; isa qo’achuun qaba ta’a;
Jireenya isaa jiraachuu qaba. " Nuti si jaalanna, Gooftaa. Maqaa kee kabajamaatiin nan kadhadha. Ameen.
Gaaffii isin gaafachuun barbaada.
Otuu har’a duutanii isin akka jannata galtan sirriitti ni beektu?
“Akkan jannata galu hin beeku,” jechuu dandeessu.
Feetu immoo isin gonkuma waa’ee dhimma kana hin yaadne ta’uu ni danda’a.
Garuu. Kitaabni qulqulluun isin daandii jannataa irra akka jirtan % itti amanuu ni dandeessu.
Amma, akkaataa Kitaaba Qulqulluutiin, Fayyinsa argachuu akka dandeessaniif
waantoota hubachuu isin irraa eegama. Waanti inni duraa:
Kitaabni qulqulluun Roomaa : keessatti akkas jedha, "Namootni hundi waan cubbuu hojjeteef, ulfinni Waaqayyoo isaan hanqata.”
Kitaabni qulqulluun akkas jedhe nuti hima, "cubbuun seera kabajuu dhabuudha.” Yeroo nuti seera Waaqayyoo cabbisnu, cubbuu hojjenna.
Akkaataa Keewwata kanaatiin, hundi keenyi cubbamaadha.
Ani cubbamaa; Isin cubbamaadha.
Akka carraa ta’ee cubbuu keenyaaf kanfaltiin kanfalu ni jira Roomaa : akkas jedha, "Miindaan cubbuu du’adha.”
Amma, jechi “miindaa” jedhu kanfaltii jechuudha. Inni waanta isin argatan dha.
Yoon hojii dhaqu isaan maallaqa naaf kennu. Maallaqichi miindaa keenya dha. Garuu sababa cubbuu keenyaatiin, miindichi du’adha.
Waanti ani arga’e du’adha. "Miindaan ykn kanfaltii cubbuu du’a dha.”
Amma, waa’ee du’aa yeroo yaadnu, namootni hedduun waa’ee du’a qaamaa yaadu,
Garuu Mul’ata Yohaannis :- akkas jedha, "Duutii fi jahaannamni galaana ibidaa keessatti darbatamniiru.”
(Rifereensii gaahannamaa) Kitaabichi akkas jedha, "Galaanni ibidaa du’a lamaffaa dha.
Waanti kitaaba jireenyaa keessatti barreefamee hin argamen kamiyyuu galaana ibidaa keessatti gatame.”
Kanaafuu, akkaataa Kitaaba Qulqulluutiin cubbuu keenyaaf miindaan keenya u’a qaamaa qofaa miti,
garuu du’a lamaffaa dha. Isin akkas jettu, “Duuni lammaffaa maaliidha?
Galaan dhibidaa keessatti gatamuu. “Kun du’a lamaffaa dha.” Sababa cubbuu keenyaatiin kan argane du’a dha:
Du’a qaamaa ykn foonii, du’a lamaffaa, galaana ibidaa keessatti gatamu dha.
Mul’ata Yohaannis : akkas jedha, "Qoodi warra lugnootaa,
warra amantii hin qabnee, warra gumaa, warra ciigga’amoo, warra halalee, warra qoricha namatti godhan, warra waaqayyoolii tolfaman waaqeessanii, … hundumaas garuu…”
Amma sun tarreefama gaarii miti, sirrii dha?
Warra gummaa, warra ciigaa’amoo, warra tolcha ykn qoricha namatti godhan. Namootni hedduun irratti waliigalu, Most people would agree, a murderer,
"Ooh Eeyyee. Isaan Gahaannama galu." Garuu hubadha inni akkas jedha, "Qoodi warra lugnootaa,
warra amantii hin qabnee, warra gumaa, warra ciigga’amoo, warra halalee, warra qoricha namatti godhan,
warra waaqayyoolii tolfaman waaqeessanii, … hundumaas garuu…” xumura tarreefama kanaa irratti akkas jedha:
"fi warri sobduu hundumaas garuu, kuufama ibidii fi dhagan boba’u keessaa balalchu in ta’a:
innis du’a lammaffaa dha.” sababni Waaqayyo cubbuu sobuu xumura tarreefamichaa irratti dabale,
Inni qabxii gochuuf yaalii gochaa jira, qabxichis kana:
Nuti hind cubbamtoota dha. Namni tokkoon tokkoon isaa sobeera. Namni tokko iyyuu sirriin hin jiru jechuuf yaalii godheera;
Nuti hundi cubbuu hojjenneera; nuti hundi gaahannama galuu qabna.
Amma kun oduu gaddisiisaa dha. Ani cubbamaa dha. Isin cubbamaa dha. Nuti hundi durumaa gahaanama akka galu nutti murtahaara,
Garuu wangeelli oduu ykn dhaga dhagahii gaariidha.
Roomaa : akkas jedha, "Miindaan cubbuu du’a dha.” Waanti kun amma maal jechuu akka ta’e hubanneera.
Garuu, kutaa lamaffaa jechichaa akkas jedha, “Garuu kennaan Waaqayyoo jireenya bara baraa karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos argannu dha.”
Kitaabni qulqulluu akkas jedha,
Waaqayyoo keennaa siif kennuuf barbaadu qaba; kannaan kun jireenya bara baraa dha. Amma Efesoon :- keessatti
Kitaabni qulqulluun akkas jedha, "Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan.” Jecha “ayyaana” jechuun
Waanta isiniif hin malle argachuu jechuu dha. Isin ayyaana bifa kanfaltiitiin hin argatan; isin ayyaana argataniif hin kanfaltan.
"Isin fayyitan" gannama irraa fayyuudhaaf akka wabiidha,
Sababni isaa ani achi galuu hin barbaadu. Isinis achi deemuu akka hin barbaadne nan amana.
Jechi “amanti” jedhu amanuu jechuu dha. Kitaabni akkas jedha, "Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan, inni immoo kennaa Waqayyoodha malee gocha ofii keessanii miti.”
Inni isin wajjin hariiroo homaa hin qabu. Sababni isaa kunoo dha:
"Inni kennaa Waaqayyoo ti: kan hojii miti, kanaafuu namni kamiyyuu itti boonuu hin qabu." Kennaan
Kan isin argachuuf hojjetan miti. Kennaan waanta isiniif kenname tokkodha. Namni biraan
Kennichaaf ni kanfala, garuu isin kennichaaf hin kanfaltan. Otuu ani kennaa isiniif kennee fi bakka isaa maallaqa akka naaf kennitan isin gaafadhee,
Inni kennaa miti. Otuu ani kennaa isiniif kenne, garuu bakka isaa waanta tokko akka gootan otuun isin gaafadhe,
Inni kennaa miti. Amma, kennaaan isiniin homaa hin baasiisu,
garuu nama kennaa sana isiniif kenne gatii baasiisa.
Kennaan Waaqayyoos bifuma walfakkaatuun dha. Kiristoos kennaa sanaaf kanaleera ta’uu qaba.
Roomaa : akkas jedha, "Waaqayyo garuu, utuma nuyi cubbamoota taane jirruu, Kiristoos nuuf du’uu isaatiin hammam akka nu jaallate in agarsiisa.”
Yohaannis :, Kitaaba Qulqulluu keessaa jechi baay’ee beekamaa ta’e akkas jedha,
"Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate;
Kun immoo kan isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduufi miti.”
Wangeelli kana dha: Yesuus Kiristoos Dubaroo irraa dhalate. Inni cubbuu otuu hin hojjjetiin jiraate;
Inni gonkumaa cubbuu hin hojjenne, inni waan badii tokkoyyuu hin hojjenne. Inni fannoo irratti du’ee,
owaalame. Kitaabni qulqulluu lubbuun isaa guyyoota sadii fi halkan sadiitiif ganama galuu ishee nutti ni hima.
, akka cubbuu mataa isaatiif hin kanfale inni owaalcha irraa ka’e.
Sababni isaas inni cubbuu hin qabu ture. Inni cubbuu keenya nurraa dhiquuf du’e. Ilaali, inni itti kanfaleera.
Kennichi kan itti kanfalame dha. Amma, isin waa’ee kennichaa kana hubachuu qabdu:
Yohaannis : akkas jedha, "jireenya bara baraa". Kennichi jireenya bara baraadha.
Jechi “jireenya bara baraa” jechuun bara baraaf kan jiraatu jedhuudha. Jireenya bara baraaf jiraatu jechuu dha.
Jireenyi bara baraa xumura hin qabu. Yohaannis : akkas jedha, "jireenya bara baraa".
"Bara baraa" jechuun inni gonkuma hin xumuramu jechuudha. Yohaannis : akkas jedha, "jireenya bara baraa". Roomaa
: akkas jedha, "jireenya bara baraa". Kitaaba Qulqulluu guutuu isaa keessatti yaada kana ni argatu: jireenya bara baraa
jireenya bara baraa, jireenya bara baraaf jiraatu, jireenya xumura hin qabne.
Akkaataa Yohaannis :tiin, Isin jireenya bara baraa bataluma amantaniin ni argatu. “Namni ilma Waaqayyootti amanu, jireenya bara baraa qaba.
Amma, namootni tokko tokko akkasitti yaadu, "Tole, ani fayyinsa argachuu danda’a,
Garuu takkaa ani isa argadhee booda, yoon waanta badaa ta’e kan akka halalumaa ykn sagaagalummaa,
Kan akka nama ajeessuu, kan akka of ajeesuu yoon raawwadhe, sanaa booda Waaqayyo fayyinsa koo in narraa ni fuudha."
Garuu yoo inni deebisee fudhate, kennichi yknn jireenyichi bara baraaf hin jiraatu. Ilaala,
Fayyinsi waanta nuf kanfalamu akka hin taane hubachuu qabna.
Yeroo tokko argannaan kan ol isa keenyu miti. Kitaabni qulqulluu Tiitoos : keessatti akkas jedha, The Bible says in Titus :, "Abdii jireenya bara baraa,
Isa Waqaayyo inni matumaa hin sobne, bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu koo ti.”
Ilaala, abdiin keenya kan jireenya bara baraa kana dha: Waaqayyo hin sobu. Waaqayyo jireenya bara baraa akka naaf kennu yoo na abdachiiseera ta’e,
Sanaa booda waanta ta’u tilmaami. Jireenya bara baraadha. Inni jireenya bara baraa naaf kennuuf na abdachiiseera.
Kunis bara baraaf ni tura. Isin akkas jettu, “Tole, otuu ani waan badii hojjedhe maaltu ta’a?”
Tole, inni kan of godhannu miti. Inni ana wajjin waanti walitti isa fidu hin jiru. Inni kennaa bara baraaf jiraatu dha.
Amma waanti isin gotan inni qofaan kanadha:
Akkuma kennaa kan biraa kamiyyuu, isin filannoo kennaa kana fudhachuu ykn fudhachuu dhiisuu argataniittu.
Isin akkas jettanii gaafachuu ni dandeessu, “Tole, akkamiin ani kennaa Waaqayyoo fudhadha?” Roomaa :
Akkas jedha: "otuu…" Amma, inni “otuu” kan jedhu isin filannoo waan argataniif dha.
Inni akkas jedha, "Yesuus Gooftaa akka ta’e afaan keetiin yoo amante… "
Jechi “beeksisuu” jechuun amanuu jechuudha. Isin akkas ni jettu, “ Ani maal amana?” Tole, isin
Cubbamtoota ta’uu keessan amantu. Isin Ganama galuu akka qabdan amantu.
Garuu isin dhiifatama ni gaafatu. Inni akkas jedha, "Yesuus Gooftaa akka ta’e afaan keetiin yoo amante… "
Garuu kun jecha dubbachuu irra kan darbu dha. Inni akkasiis jedheera,
"...Waaqayyo akka du’aa isa kaa’e immoo garaa keetii yoo amante …”
Isin Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif jedhee Fannoo irratti du’ee, owaalamuu, owaalcha irraa ka’uu ni amantu.
Inni akkas jedha, “Yesuus Gooftaa akka ta’e
afaan keetiin yoo amante fi Waaqayyo akka du’aa isa kaa’e immoo garaa keetii yoo amante
fayyina bara baraa ni argatta,” Jedha Kitaabni quqlulluun.
Inni isin fayyuu dandeessu hin jenne. Isin fayyuu akka dandeessan abdii qaba hin jenne.
Waaqayyo akkas jedha, "Yoo ati afaan keetiin beeksiiste fi laphee kee irraa yoo amante Ani nan si fayyisa.”
Hubadhu isin bataskaana deemuu hin qabdan. Isin cuubamuu qabdu hin jedhu.
Cubbuu keessaniif gaabbii seenaa hin jedhu. Isin waanta tokko godhaa isiniin hin jedhu;
Amanati akka isin fayyisu isa gaafadha. Isin sana garaa keessan irraa yoo amantan,
Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif fannoo irratti du’uu fi owaalamuu isaa akkasumas du’aa owaalcha diigee ka’uu isaa yoo amantan,
Inni kennaa isiniif kennuuf jedha, kennichis jireenya bara baraadha.
Achii hoo, maaliif afaan keessaniin amuma hin beeksiistaniree?
Ani karaa kadhannaa isin gargaaruu barbaada. Isin kanatti yoo amantan,
maaliif ammumma ana wajjin hin kadhatan:
Isin kadhannaa sana yoo kadhataniifi garaa keessani irraa yoo amantan akka Kitaaba qulqulluutti,
Isin amma fayyitaniittu. Isin jireenya bara baraa ni qabdu. Baga Gammaddan.